စွဲလမ်းမှုအတွက်မှောင်မိုက်သောဘေးထွက်များအတွက် Neurobiological အလွှာ (2009) - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်
Neuropharmacology ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဇန်နဝါရီ 1, 2010 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 18-31 ။
သြဂုတ် 7, 2008 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2008.07.043
ဂျော့ခ်ျအက်ဖ် Koob, Ph.D ဘွဲ့ကို
မူးယစ်ဆေးစွဲမူးယစ်ဆေးဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးသောအခါမူးယစ်ဆေး, စားသုံးမှုကန့်သတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးရှာယူနေတဲ့မလှူသဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသက်ရောက်မှုမျိုးစုံကိုစိတ်ခွန်အားနိုးယန္တရားများနှင့် compulsive (အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်) မှ Impulse (အပြုသဘောအားကောင်း) မှဖြစ်စဉ်များတဲ့ရောဂါအဖြစ် conceptualized နိုင်ပါသည်။ အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များ၏ဆောက်လုပ်ရေးအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်လျော့ချကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းသောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် ventral striatum နှင့်တိုးချဲ့ amygdala တို့ပါဝငျသော Basal forebrain အဆောက်အဦများအတွင်းဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် key ကို neurochemical ဒြပ်စင်၏ dysregulation ထံမှရယူထားခြင်းမှတွေးဆသည်။ ဤအအဆောက်အဦများအတွက်တိကျသော neurochemical ဒြပ်စင်ဖြစ်သောတိုးချဲ့ amygdala ထဲမှာ, ventral striatum အတွက် dopamine နဲ့ opioid peptide function ကိုအတွက်လျော့နည်းစေ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သော corticotropin-releasing အချက် (CRF) အဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ, ၏စုဆောင်းမှုအဖြစ်, ဆုလာဘ် neurotransmission အတွက်လျော့နည်းစေမသာပါဝင်သည် ။ အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှ acute ဆုတ်ခွာဆုလာဘ်တံခါးခုံ, စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုး, နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးမြှင့်အတွက်တိုးထုတ်လုပ်သည်။ CRF အဲဒီ receptor ရန်လည်းမှီခိုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုပိတ်ဆို့။ တစ်ဦးကဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုကိုတုန့်ပြန်မှုစနစ်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence သို့ဆက်လက်ရန်, ထပ်ခါတလဲလဲဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း sensitized ခံရဖို့စူးရှသောအလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုအားဖြင့် activated ခံရဖို့တွေးဆသည်, စွဲလမ်း၏ compulsive အထောက်အကူပြုရန်။ CRF နှင့်အတူအပြန်အလှန်နဲ့ဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ၎င်းတိုးချဲ့ amygdala အတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ norepinephrine, dynorphin နှင့် neuropeptide Y. ဆုလာဘ် function ကိုဆုံးရှုံးများ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းအားကောင်းတဲ့ neurochemical ထောက်ပံ့ပါဝင်သည် အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်စွဲ၏ compulsive သည့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းနှင်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များအတွက်အခြေခံ။
keywords: စွဲ, ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကို, စိတ်ဖိစီးမှု, တိုးချဲ့ amygdala, corticotropin-releasing အချက်
1 ။ definitions နဲ့စွဲအတွက် compulsive များအတွက်အယူအဆရေးရာမူဘောင်
မူးယစ်ဆေးစွဲ (ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည် relapsing ရောဂါiမူးယစ်ဆေးရှာယူမှ) မလှူ, (ii) စားသုံးမှုကန့်သတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, နှင့် (iiiအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်၏) ပေါ်ပေါက်ရေး (ဥပမာ dysphoria, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်တိုတာတွေ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးအခါတစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုးဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါထင်ဟပ် (မှီခိုအဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ်) (Koob နှင့် Le Moal, 1997). စှဲမွဲမှု ၏ syndrome ရောဂါမှတူညီဖြစ်ယူဆနေသည် ပစ္စည်းဥစ္စာမူတည် (အဖြစ်လက်ရှိအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်; American Psychiatric Association, 1994) ။ ဆေးခန်းများနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များ, ထိုအတူမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရံဖန်ရံခါပေမယ့်ကန့်သတ်အသုံးပြု အလားအလာ အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုဘို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေး-မှီခိုပြည်နယ်ပေါ်ပေါက်ရေးထံမှကွဲပြားသည်။
မူးယစ်ဆေးစွဲရှိရာ, Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံး၏ဒြပ်စင်ကပါဝငျတဲ့ရောဂါအဖြစ် conceptualized ထားပြီး ထကြွလွယ်သော "သူတို့ကိုယ်သူတို့သို့မဟုတ်အခြားသူများအားဤတုံ့ပြန်မှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအဘို့နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုမှလျင်မြန်စွာ, unplanned တုံ့ပြန်မှုဆီသို့တစ်ဦးဓာတ်" အဖြစ်အပြုအမူသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် (Moeller et al ။ , 2001) ။ ပိုကြီးတဲ့, နှောင့်နှေးဆုလာဘ် (ကျော်သေးငယ်တဲ့, ချက်ချင်းဆုလာဘ်၏ရွေးချယ်မှု: Impulse နှစ်ခု domains များအတွက်တိုင်းတာRachlin နှင့်အစိမ်းရောင်, 1972) သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်၏သင်တန်းပြောင်းလဲနေတဲ့နေဖြင့်အပြုအမူတားစီးဖို့ဒါမှမဟုတ်အစပျိုးနေသည်တစ်ချိန်ကတုံ့ပြန်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (Logan et al ။ , 1997) ။ Impulse (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်အတွက်အဓိကလိုငွေပြမှုဖြစ်ပါတယ်Allen က et al ။ , 1998) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအဖြစ်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်ပါ။ စစ်ဆင်ရေး, နှောင့်နှေး-to-ဆန္ဒပြည့်တာဝန်များကို (နှောင့်နှေးလျှော့တာဝန်များကို) (ထကြွလွယ်သောရှေးခယျြမှု) နှင့်ရပ်တန့်-signal ကိုသို့မဟုတ် go / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန် (အပြုအမူ Impulse) (Impulse ၏အစီအမံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြFillmore နှင့် Rush, 2002; အစိမ်းရောင် et al ။ , 1994). အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော ရှေးခယျြမှုအခြေအနေများတွင်မမှန်ကန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှု၏မျက်နှာကိုအတွက်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ဇွဲ၏မျက်နှာကိုအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်ဇွဲဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြုအမူ၏ဒြပ်စင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား element တွေကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဖော်ပြထားအဖြစ်ပစ္စည်းမူတည်၏ရောဂါလက္ခဏာမှအလားတူနေသောခေါင်းစဉ်: တစ် persistent သို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာရရှိရန်လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်သုံးစွဲအချိန်မှာများစွာသောသဘောတူညီချက် (ရှိခဲ့ပွီး၏အသိပညာနေသော်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်American Psychiatric Association, 2000).
Impulse နှင့် compulsive ၏သံသရာပြိုလဲသုံး stages- ပါဝင်တဲ့ပေါင်းစပ်စွဲသံသရာဖြစ်ထွန်းအဆက်မပြတ် / မျှော်လင့်, မူးရူး / မူးယစ်နှင့် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်-where Impulse မကြာခဏအစောပိုင်းအဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ခြင်းနှင့် compulsive terminal ကိုအဆင့်ဆင့်မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ compulsive မှ Impulse ထံမှတစ်ဦးချင်းရွေ့လျားအဖြစ်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီ (ထိုလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကားမောင်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်အပြုအမူကားမောင်းအပြုသဘောအားကောင်းရာမှဖြစ်ပေါ်Koob, 2004) ။ အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ထားတဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ဥပမာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်) ၏ဖယ်ရှားရေးတစ်တုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ, မှီခို-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေတော်မူသောအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသုံးပါးအဆင့် ( ပို. ပြင်းထန်သောဖြစ်လာ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်အဖြစ် conceptualized နှင့်နောက်ဆုံးတွင်စွဲအဖြစ်လူသိများသည့်ရောဂါဗေဒပြည်နယ်မှဦးဆောင်နေကြKoob နှင့် Le Moal, 1997()စားပွဲတင် 1) ။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမှဆင်းသက်လာကြောင်း compulsive ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် အဆိုပါစွဲသံသရာ၏စင်မြင့်။
ကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသံသရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူစွဲ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဘာသာရပ်များသိသိသာသာသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာအပါအဝင်ဂန္ထဝင်စွဲနှင့်အတူဆက်စပ်စံ၏အများဆုံးတွေ့ဆုံရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Opioids စွဲ၏ဂန္မူးယစ်ဆေးဝါးများထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်သောမူးယစ်, သည်းခံစိတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှုများနှင့်လေးနက် dysphoria, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေခြင်း, abstinence စဉ်အတွင်း somatic ဆုတ်ခွာဆိုင်းဘုတ်များအပါအဝင်သွေးကြောသွင်းသို့မဟုတ်သောက်သည်မူးယစ်ဆေး-ယူပြီးအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ၏တစ်ဦးကပုံစံ။ ရယူ opioids နှင့်အတူပြင်းထန်သောအတွက်အဆက်မပြတ် (တဏှာ) ကိုမကြာခဏဆုတ်ခွာ၏ somatic ဆိုင်းဘုတ်များ precedes နှင့်မူးယစ်ဆေးရယူဒါပေမယ့်လည်းဆုတ်ခွာနှင့်ဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့မသာနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေး abstinence ၏ပြင်းထန် dysphoria နှင့်အီရှောင်ရှားရန်ရရှိသောရမည်ဖြစ်သည်ရှိရာတစ်ဦးကပုံစံဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအလားတူပုံစံကိုလိုက်နာပေမယ့်ပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ မူးရူး / မူးယစ် ဇာတ်စင် (psychostimulants နှင့်အရက်) သို့မဟုတ်လျော့နည်း မူးရူး / မူးယစ် နှင့်ပိုပြီး ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် နှင့် အဆက်မပြတ် / မျှော်လင့် အဆင့် (နီကိုတင်းနှင့် cannabinoids) ။
အရက်စွဲခြင်းသို့မဟုတ်အရက်, အလားတူလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါသည်, သို့သော်ပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ၏ပုံစံကိုမကြာခဏမိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်၏နေ့စဉ်ဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်ကြာရှည်ရက်ပေါင်းဖြစ်နိုငျသောအရက်စားသုံးမှု၏ Bing အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်တစ်ဦးပြင်းထန်စိတ်ခံစားမှုနှင့် somatic ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအရက်သမားတိုးချဲ့ကာလအဘို့အထိုကဲ့သို့သောမူးရူး / ရုပ်သိမ်းရေးပုံစံနှင့်အတူဆက်လက်ပေမယ့်တချို့တစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့ abstinence ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားဖို့အားလုံးကိုအချိန်များတွင်ရရှိနိုင်အရက်ရှိရမည်ရသောတစ်ဦး opioid ကဲ့သို့အခွအေနသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရွက်ကြီးစွဲအထက်ပါပုံစံများ-The အတူခြားနား မူးရူး / မူးယစ် ဇာတ်စင်နီကိုတင်းမှီခိုတဲ့အသေးစားအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသော။ နီကိုတင်းစားသုံးမှု၏ပုံစံသည်အိပ်ပျော်၏ကာလအတွင်းမှာ မှလွဲ. မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွန်အမင်း titrated စားသုံးမှု၏တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် abstinence စဉ်အတွင်းအသုံးပြုသူများ dysphoria, ယားယံခြင်း, နှင့်ပြင်းထန်သောတဏှာအပါအဝင်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ, ခံစားရသည်။ ဆေးခြောက်မူတည်သိသိသာသာမူးယစ်ဇာတ်စင်အတူ opioids နှင့်ဆေးရွက်ကြီးဆင်တူတဲ့ပုံစံအောက်ပါအတိုင်းပေမယ့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်အဖြစ်, ဘာသာရပ်များ dysphoria, ယားယံခြင်း, အိပ်နှောင့်အယှက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှိုးနာရီနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကနာတာရှည်မူးယစ်ခြင်းဖြင့်ထင်ရှားစွာပြအသုံးပြုမှုပုံစံကိုပြသစတင်ဖို့။ ထိုကဲ့သို့သောကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းအဖြစ် Psychostimulants သည်, အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ပုံစံကိုပြသ မူးရူး / မူးယစ် Bing ကြာချိန်အတွက်နာရီသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းဖြစ်မကြာခဏနိုင်သည့်အတွက်စင်မြင့်အစွန်းရောက် dysphoria နှင့်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဆုတ်ခွာ ( "ပျက်ကျမှု") အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်။
1.1 ။ လှုံ့ဆျောမှု, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကို
လှုံ့ဆျောမှု (က "စနစ်တကျလုပ်ဆောင်မှုထုတ်လုပ်ရန်မြေတပြင်လုံးတိရိစ္ဆာန်များ၏သဘောထားကို" အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်မယ့်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်Hebb, 1972), နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များစဉ်ဆက်မပြတ်မဟုတ်ပေမယ်မဟုတ်ဘဲအချိန်ကျော်ခြားနားသည်။ Wikler နေဖြင့်အစောပိုင်းအလုပ်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ် drive ကိုပြည်နယ်များရှိအပြောင်းအလဲများကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ (မူလတန်းလိုအပ်ကြောင်း "satiation" သို့မဟုတ်ဆန္ဒပြည့်အဖြစ် "ဆာလောင်မွတ်သိပ်" သို့မဟုတ်မူလတန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်ပေါ်မှာမော်ဖင်းအကိုက်၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်ဆုတ်ခွာအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြထားWikler, 1952) ။ Wikler အပြုသဘောအားကောင်းပင်အကြီးအကျယ်မှီခိုဘာသာရပ်များ (ထိုသွေးကြောသွင်း opioid ဆေးထိုး၏စိတ်လှုပ်ရှား) တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့စောဒကတက်ပေမဲ့လည်းမှီခို (အထကျကိုကြည့်ပါ) ဆန္ဒပြည့်၏အသစ်တစ်ခုအရင်းအမြစ်, အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များ၏ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
လှုံ့ဆော်မှုများ၏ concept ကိုလှုံ့ဆျောမှု၏ရှောလမုန်၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီကယာယီဒိုင်းနမစ်၏ဆက်စပ်အတွက် hedonic ထိခိုက်စေ, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းထဲမှာစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များနှင့်အတူ inextricably နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရှောလမုန်နှင့် Corbit (1974) , hedonic ထိခိုက်စေ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များတခါအစပျိုးကြောင်း postulated အလိုအလျောက် hedonic ခံစားချက်တွေကိုများ၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချသည်ဟုယန္တရားများနှင့်အတူဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ဖြင့် modulated နေကြသည်။ အဆိုပါ တစ်ဦး-ဖြစ်စဉ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ် hedonic လေ့ (သို့မဟုတ်သည်းခံစိတ်) တို့ပါဝင်သည်, နှင့် b-ဖြစ်စဉ်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ် hedonic ဆုတ်ခွာ (abstinence) တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ တစ်ဦး-ဖြစ်စဉ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်အပြုသဘော hedonic တုံ့ပြန်မှုပါဝင်ပါသည်မကြာမီတစ်လှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုအပြီးဖြစ်ပေါ်, ပြင်းထန်မှု, အရည်အသွေး, နှင့်စစ်ကူများကြာချိန်နှင့်အတူနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေပါသည်နှင့်သည်းခံစိတ်ပြသထားတယ်။ ဆနျ့ကငျြဘခုနှစ်, b-ဖြစ်စဉ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ပြီးနောက်ပေါ်လာသော တစ်ဦး-ဖြစ်စဉ်ကို ရပ်စဲထားပြီး, အနုတ်လက္ခဏာ hedonic တုံ့ပြန်မှုပါဝင်ပါသည်နှင့်ပျက်စီးယိုယွင်းနှေးတစ်ခု asymptote အထိတည်ဆောက်ရန်နှေးကွေးစတင်ခြင်း, အတွင်းနှေးကွေးသည် ဖြစ်. , အထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပိုမိုကြီးမားရရှိသွားတဲ့။ ဒီမှာစာတမ်းကြောင့်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များဦးနှောက်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပုံစံမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေအတွက် compulsive များအတွက်အဓိကတွန်းအား၏တဦးတည်းကိုထင်ဟပ်စောစောမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေစတင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်မှီခိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်း syndrome ရောဂါ၏ပေါ်ထွန်းခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ် စိတ်ခွန်အားနိုး ထိုကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် (ဥပမာ dysphoria, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်တိုတာတွေ) ၏ပေါ်ပေါက်ရေးအဖြစ်မှီခို၏ရှုထောင့်ကမူးယစ်ဆေးဝါးမှဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးအခါ (Koob နှင့် Le Moal, 2001), ထက်ပေါ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှီခိုလက္ခဏာ။ အမှန်စင်စစ်အချို့ကြောင့်စွဲဖို့ပြောပြတယ်ကဲ့သို့သောအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မှီခိုသတ်မှတ်နိုင်သည်ကိုစောဒကတက်ကြပြီ
"မူးယစ်ဆေးဝါး, အရာဝတ္ထု, အခန်းကဏ္ဍ, လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အခြားစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-Source အပေါ်မှီခို၏အယူအဆသည်၎င်း၏မရှိခြင်းအတွက်ကြုံတွေ့ထိခိုက်စေအနုတ်လက္ခဏာများ၏အရေးပါအင်္ဂါရပ်လိုအပ်သည်။ ( "စသည်တို့ကို, မှီခို၏ဒီဂရီပျော့အီအနေဖြင့်အစွန်းရောက်ဒုက္ခဆင်းရဲအထိဖြစ်နိုင်သည်သောဤအနုတ်လက္ခဏာပမာဏကိုထိခိုက်စေနှင့်ပမာဏမှာတူညီနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပါကမူးယစ်ဆေးမပါဘဲလုပ်ဖို့လိုအပ်အခက်အခဲသို့မဟုတ်အားထုတ်မှု၏ပမာဏနှင့်အတူပမာဏမှာတူညီစေခြင်းငှါ, အရာဝတ္ထုစယ်, 1976).
ကိုကင်းများ၏ hedonic သက်ရောက်မှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်လျင်မြန်စွာစူးရှသောသည်းခံစိတ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုကဲ့သို့ဆိုးကျိုးများသောက်သည် coca ငါးပိလူ့လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့ကြ (Van Dyke နှင့် Byck, 1982()ပုံ 1A) ။ တစ်ခုတည်းဆေးလိပ်သောက်သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, "မြင့်" စတင်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအုပ်ချုပ်ရေး၏သောက်သည်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အလွန်လျင်မြန်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးလျှင်မြန်သည်းခံစိတ်ထငျရှား။ အဆိုပါ "အဆင့်မြင့်" ကိုကင်း၏သိသာထင်ရှားသောအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်နေသော်လည်းအလျင်အမြန်လျော့နည်းစေပါသည်။ ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လူ့ဘာသာရပ်များတွင်လည်းအမှန်တကယ်ကိုကင်းများ၏သွေးအဆင့်ဆင့်နေသော်လည်းနောက်တဖန် "dysphoria" ဟုနောက်ဆက်တွဲသတင်းပို့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သွေးကြောသွင်းကင်း (လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများအတွက်တိုးမြှင့် "အနိမ့်" ကနောက်တော်သို့လိုက်နေတဲ့လျင်မြန်စွာ "အလုအယက်" ၏အလားတူပုံစံများထုတ်လုပ်Breiter et al ။ , 1997()ပုံ 1B) ။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ, ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းထိုကဲ့သို့သောမြင့်တက်လျှင်မြန်စွာစတင်နှင့် (Self-အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုတည်း session တစ်ခုအတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်Kenny et al ။ , 2003()ပုံ 2), လူ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများတစ်ဒီကဗျာအကြံအစည်ဆောင်သော။ ဤရလဒ်သည်အရှင် "အခြေခံ" ICSS တစ်ဦးအားကြီးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောမြင့်အတွက်ကင်းရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ access ကိုအောက်ပါဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းမြင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှထပ်ခါတလဲလဲ, အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှု (ဆိုလိုသည်မှာကျန်နေတဲ့ hysteresis) အကြားအခြေခံအဆင့်ဆင့်ပြန်သွားဖို့ပျက်ကွက်ကြောင်းသရုပ်ပြ တံခါးခုံ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ hedonic allostasis မော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေးဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားသည်။
(A) Dysphoric ခံစားချက်များကိုထိုအသွေး၏သွေးရည်ကြည်ထဲမှာကိုကင်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတော်လေးမြင့်မားတဲ့ကနျြရသော်လည်း, ကိုကင်းငါးပိသောက်သည်သူကိုစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များအတွက်ကနဦး Euphoria ပီတိနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ အဆိုပါ dysphoria စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, ...
ကြွက် (n = 11) ၏အဆုံးပြီးနောက် 10 မိနှင့် 20, 40 နှင့် 80 ဇတိုင်းတာခဲ့ကြသည် Self-စီမံခန့်ခွဲ 0.25, 15,2နှင့်ကိုကင်းများ၏ 24 ထိုး (48 ဆေးထိုးနှုန်း mg), နှင့် intracranial Self-stimulation ဆုလာဘ်တံခါးမှခွင့်ပြုခဲ့သည် အသီးအသီးသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး ...
အလားတူရလဒ်များသည်စူးရှသော opioid နှင့်အီသနောဆုတ်ခွာပူးတွဲ dysphoria ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှု (ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာတွေ့ရှိပြီလျူနှင့် Schulteis, 2004; Schulteis နှင့်လျူ, 2006) ။ ဤတွင်, မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ခုတည်းထိုးအောက်ပါ naloxone အုပ်ချုပ်ရေးထပ်ခါတလဲလဲမော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naloxone-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆုလာဘ် ICSS ဖြင့်တိုင်းတာတံခါးခုံ, နှင့်တိုးမြှင့်တံခါးတိုးလာ (လျူနှင့် Schulteis, 2004) ။ အလားတူရလာဒ်များအီသနောထံမှထပ်ခါတလဲလဲစူးရှဆုတ်ခွာ (Schulteis နှင့်လျူ, 2006) စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကို၏ dysregulation အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဘုံဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ နာတာရှည်ကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာ (Markou နှင့် Koob, 1991), စိတ်ကြွဆေး (Paterson et al ။ , 2000), opioids (Schulteis et al ။ , 1994), cannabinoids (Gardner နှင့် Vorel, 1998), နီကိုတင်း (Epping-ယော်ဒန်မြစ် et al ။ , 1998) နှင့်အီသနော (Schulteis et al ။ , 1995) (စူးရှ abstinence စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးစေပါတယ်နှင့်တံခါးခုံတွင်ဤဓာတ်လှေကားအချို့အထိတဦးတည်းတစ်ပတ်ကြာရှည်နိုင်ပါတယ်ပုံ 3) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ယန္တယားစေ့စပ်ထားရာ compulsive ၏တဦးတည်းရှုထောင့်အဘို့စင်မြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်သောအယူအဆမှယုံချေးငှားရမည်။
(Amicrodialysis ကဆုံးဖြတ်ကြွက် amygdala အတွက် CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity (CRF-L-မှာ IR) အပေါ်အီသနောဆုတ်ခွာ၏) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Dialysate မှန်မှန် nonsampling2ဇကာလနှင့်အတူ alternated လေး2ဇကာလကျော်စုဆောင်းခဲ့သည်။ စာအဆက်အသွယ်လေးပါးနမူနာကာလ ...
မကြာသေးမီကပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီတစ်ခု neurocircuitry ရှုထောင့်ကနေမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ neurobiology ၏ domains များသို့တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ဦးနှောက်ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များတစ်ခု allostatic မော်ဒယ် (စွဲလမ်းအတွက်မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောလှုံ့ဆျောမှုအတွက်အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲရှင်းပြဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီKoob နှင့် Le Moal 2001, 2008) ။ ဒီရေးဆွဲရေးအတွက်, စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ compulsive အသုံးပြုရန်ပံ့ပိုးနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အတွက်ရလဒ်များကြောင့်ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် / Anti-ဆုလာဘ်ယန္တရားများ၏တိုးပွားလာ dysregulation တစ်သံသရာအဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ် function ကို၏ပုံမှန် homeostatic န့်အသတ်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း Counteradaptive ဖြစ်စဉ်များပုံမှန် homeostatic အကွာအဝေးအတွင်းပြန်လာရန်ပျက်ကွက်။ အတွင်း-system ကို neuroadaptations နှင့်အကြား-system ကို neuroadaptations (: ဤ counteradaptive ဖြစ်စဉ်များနှစ်ခုယန္တရားများကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့တွေးဆကြသည်Koob နှင့် Bloom, 1988).
တစ်ဦးအတွင်း-system ကို neuroadaptation ခုနှစ်တွင် "ဟုအဆိုပါမူးယစ်ဆေးဖို့မူလတန်းဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှု element ကမူးယစ်ဆေးရဲ့သက်ရောက်မှုထောင်ဖို့သူ့ဟာသူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မယ်လို့; မူးယစ်ဆေးပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများဇွဲ ( "ဆုတ်ခွာတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်မယ်လို့Koob နှင့် Bloom, 1988) ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအတွင်း-system ကို neuroadaptation ဆုလာဘ် function ကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့စွဲနှင့်ဆက်စပ် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့၏ overactivity ထားရှိရန်ပေးထားသောဆုလာဘ် circuit ကိုအတွင်းမော်လီကျူးသို့မဟုတ်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင်လည်း (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောဆောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုထက်အခြား neurochemical စနစ်များအကျိုးကိုစနစ်၏နာတာရှည် activation နေဖြင့်စုဆောင်းသို့မဟုတ် dysregulated ထားတဲ့အတွက်အကြား-system ကို neuroadaptations ပါဝင်နိုင်Koob နှင့် Bloom, 1988) ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအကြား-system ကို neuroadaptation အကျိုးကိုဆားကစ်များကအခြားမတူညီတဲ့ဆားကစ် (Anti-ဆုလာဘ် circuit ကို) အရာတစ်ခု circuitry ပြောင်းလဲမှု activated ဖြစ်ပါတယ်နှင့်နောက်တဖန်ဆုလာဘ် function ကိုကန့်သတ်, လုပ်ရပ်တွေကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်စွဲလမ်း၏ compulsive အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့တွေးဆသော neurocircuitry အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အကောင့်မှဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များအတွက်ပေါ်ပေါက်သော neuroadaptational အပြောင်းအလဲများကိုစူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
1.2 ။ နေရာခြင်းကိုမနှစ်သက်, စိုးရိမ်ပူပန်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်ဆုလာဘ်တံခါး: အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဲ့သို့ပြည်နယ်များဖြင့်တိုင်းတာစွဲလမ်းအတွက် compulsive ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ
၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင် (ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်သုံးပြီးမိုးရွာသွန်းမှုဆုတ်ခွာတစ်ခုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးများနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုကနေအလိုအလျောက်ငွေထုတ်ရန် (အစား preference ကိုထက်) conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်၏အတိုင်းအတာများပါဝင်သည်Markou နှင့် Koob, 1991; Schulteis et al ။ , 1994, 1995; Epping-ယော်ဒန်မြစ် et al ။ , 1998; Gardner နှင့် Vorel, 1998; Paterson et al ။ , 2000), နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုး (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ Shippenberg နှင့် Koob, 2002; Sanchis-Segura နှင့် Spanagel, 2006).
1.3 ။ တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေအားဖြင့်သတ်မှတ်အဖြစ်စွဲလမ်းအတွက် compulsive ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ: ကြာရှည်သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စက်လှေကား
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအတွက်တစ်ဦးကတိုးတက်သောတိုးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု characterizing အဓိကအပြုအမူဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်များ၏စံနှုန်းများနှင့်အတူတရားဝင်မှုရင်ဆိုင်ရရှိပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်: (အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်း 1994) "အဆိုပါပစ္စည်းဥစ္စာကိုမကြာခဏပိုကြီးတဲ့ပမာဏနှင့်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ထက်ပိုရှည်ကာလအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်" ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းပုံစံအရာနှင့်အတူတစ်ဦးကမူဘောင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်၏မကြာသေးမီတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကတော့ neuropharmacological နှင့်စူးရှသောကိုကင်းများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ neurobiological အခြေစိုက်စခန်းများရှာဖွေစူးစမ်းရည်ရွယ်အတွင်း-ဘာသာရပ်ဒီဇိုင်းများအားဖြင့်ထောက်ပံ့အချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအနက်ကိုခွင့်ပြုပါရန်ယနေ့အ နေ့မှစ. တည်ငြိမ်အပြုအမူများတည်ထောင်ခြင်းပါဝင်ပတ်သက်။ 1998 အထိ, Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ဆိုင်ပြီးနောက်ကြွက်ပုံမှန်အား3ဇသို့မဟုတ်စားသုံးမှုနှင့်နေ့စဉ်အစည်းအဝေးများအကြားတုံ့ပြန်၏ပုံစံများမြင့်မားတည်ငြိမ်အဆင့်ဆင့်တည်ထောင်ရန်တစ်နေ့လျှင်လျော့နည်းဘို့ကိုကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဤသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားများအတွက် neurobiological အလွှာဟာရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်အသုံးဝင်သောပါရာဒိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ differential ကို access ကိုမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများထုတ်လုပ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ကြွက် (တစ်နေ့လျှင် 1 သို့မဟုတ်6ဇဘို့သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည်Ahmed ကနှင့် Koob, 1998) ။ ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိအဖြစ် session တစ်ခုနှုန်းသွေးကြောသွင်းကင်းမှတစ်နာရီ access ကို (တိုတောင်းလက်လှမ်းသို့မဟုတ် Sha) အနိမ့်နှင့်တည်ငြိမ်စားသုံးမှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, ကိုကင်းဖို့6ဇ access ကို (ရှည်လျားသောလက်လှမ်းသို့မဟုတ် LgA) (တဖြည်းဖြည်းရက်ပေါင်းကျော်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထုတ်လုပ်ပုံ 4) ။ တိုးမြှင့်စားသုံးမှု hedonic set ကိုအမှတ်တစ်ခုတိုးအကြံပြုခြင်း, တစ်ခုလုံး session တစ်ခုကျော်ရေရှည်တည်တံ့စားသုံးမှုနှင့်ဆေးထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှု function ကိုတစ်ခုအထက်သို့ပြောင်းကုန်ပြီနှင့်တကွ, session ရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်နာရီအတွင်းတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်အုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုကင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောဆေးများမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြု, နှစ်ဦးစလုံး LgA နှင့် Sha တိရိစ္ဆာန်များနောက်ထပ်များအတွက် set ကိုအမှတ်တစ်အထက်သို့ပြောင်းကုန်ပြီအကြံပြုခြင်း, အဖြစ်နီးပါးနှစ်ကြိမ်တသမတ်တည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုစမ်းသပ်မဆိုထိုးမှာအများကြီးကိုကင်းသူတို့၏ကင်းစားသုံးမှု titrated ပေမယ် LgA ကြွက်များကြသောအခါ ယင်းဆိုးရွားလာခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းဆုလာဘ် (Ahmed ကနှင့် Koob, 1999; Deroche-Gamonet et al ။ , 2004; Mantsch et al ။ , 2004) ။ စက်လှေကားကိုလည်းကင်းသို့မဟုတ်ကင်းဆုလာဘ်တစ်ခုတိုးမြှင့်ထိရောက်မှု (ရှာထားတဲ့တိုးမြှင်လှုံ့ဆျောမှုအကြံပြုခြင်း, အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားထဲမှာကိုကင်းအဘို့ချိုးအချက်တစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်သည်Paterson နှင့် Markou, 2003; Wee et al ။ , 2008) ။ မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ထိုသို့သောတိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးယခု (ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, နီကိုတင်း, ဘိန်းဖြူနှင့်အရက်အတူလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Ahmed က et al ။ , 2000; Ahmed ကနှင့် Koob, 1998; Kitamura et al ။ , 2006; O'Dell et al ။ , 2004; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007()ပုံ 4) ။ ဒါကမော်ဒယ်စွဲအတွက် compulsive ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းစွဲလမ်းမှာရှိတဲ့ဦးနှောက်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအတွက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုအပြောင်းအလဲများစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ဘို့ကအဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအဖြစ်ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်မက်လုံးပေးသက်ရောက်မှု (တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကင်းဆုလာဘ်တစ်ခုပြေးလမ်းမော်ဒယ်အတွက်ရည်မှန်းချက်အချိန်မျိုးသုဉ်းပြီးလျော့နည်းသွားအောင်းနေချိန်ပြီးနောက်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement တိုးမြှင့် features အသစ်တွေလည်းပါဝင်တွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်အပြောင်းအလဲများDeroche et al ။ , 1999) ။ စုစုပေါင်းအဲဒီရလဒ်တွေကိုတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူယူပြီးမူးယစ်ဆေးမူးယစ်ဆေးရှာအံ့သောငှါဖို့လှုံ့ဆျောမှုပြောင်းလဲကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီတိုးမြှင်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေဆုလာဘ်၏ထိခိုက်မခံတဲ့ထင်ဟပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုပြည်နယ် (ဆှေးနှေးမှုအောက်မှာဖြစ်နေဆဲရှိမရှိVezina, 2004), ဒါပေမယ့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်များနှင့် neuropharmacological လေ့လာမှုများတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်စဉ်အတွင်းယူပြီးတိုးမြှင့မူးယစ်မောင်းနှင်နေတဲ့ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုပြည်နယ်များအတွက်ငြင်းခုန်။
(က) ကိုကင်းစားသုံးမှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးရရှိနိုင်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (± SEM ဆိုလို) ။6ဇရှည်-access ကို (LgA) ကြွက် (n = 12) သော်လည်းမ 1 ဇအတွက်တိုတောင်း-access ကို (Sha) ကြွက် (n = 12), စုစုပေါင်းကင်းစားသုံးမှုကိုဆိုလိုတာ (session တစ်ခု5ကနေသိသိသာသာတိုးမြှင့်ဖို့စတင်ခဲ့p <0.05; ...
ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း compulsive သောအယူအဆဦးနှောက်ဆုလာဘ် homeostasis အတွက်နာတာရှည်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ကိုဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်တံခါး၏အစီအမံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ကြာရှည်သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှု၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။6ဇ (ရေတို-access ကိုအုပ်စုသော်လည်းမ; သွေးကြောသွင်းပြွန်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးနှင့်ကိုကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ differential ကို access ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ access ကိုအုပျစု (LgA 1 ဇ) အတွက်ကိုတနေ့ထက်တနေ့ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ပြသခွင့်ပြုခဲ့တိရိစ္ဆာန်များ ; Sha) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုဖို့ differential ကိုထိတွေ့မှု (တဖြည်းဖြည်းအဆက်ဆက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီး LgA ကြွက်များတွင်သော်လည်းမ Sha သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ကြောင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံပေါ်တွင်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့Ahmed က et al ။ , 2002) ။ အခြေခံဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းမြင့်ယာယီရှေ့ပြေးခြင်းနှင့်အလွန်အမင်း (ကိုကင်းစားသုံးမှုအတွက်တင်းမာမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ပုံ 5) ။ ဆုလာဘ်တံခါးမှာ Post-session ကိုမြင့်တက်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်အဆင့်ဆင့်ကနေပိုပိုပြီးသှဖေညျသှားစီနောက်ဆက်တွဲ Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုစတင်ခြင်းမပြုမီအခြေခံအဆင့်ဆင့်ပြန်သွားဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးတက်သောမြင့်ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကွောငျးကိုကင်းသုံးစွဲမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောတင်းမာမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ တင်းမာမှုလျှော့ချဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီးမှတစ်ခုစူးရှသောကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ရှေ့တော်၌ထိုတူညီသောဒီဂရီမှဦးနှောက်ဆုလာဘ်တုန့်ပြန် facilitated ပေမယ် Sha ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ LgA အတွက်ပိုမိုမြင့်မားအကြွင်းမဲ့အာဏာဦးနှောက်ဆုလာဘ်တံခါးခုံမှု (Ahmed က et al ။ , 2002) ။ အလားတူရလာဒ်များ (ဘိန်းဖြူထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြKenny et al ။ , 2006) ။ ကြွက် (ဘိန်းဖြူမှ 23 ဇ access ကိုလည်းဘိန်းဖြူစားသုံးမှုအတွက်တိုး paralleled ကြောင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းအချိန်-မှီခိုတိုးပြသခဲ့သည်ခွင့်ပြုခဲ့ပုံ 5).
(Aintracranial Self-stimulation ဆုလာဘ်တံခါးများနှင့်ကင်းစားသုံးမှုတင်းမာမှုအတွက်မြင့်ကြား) ဆက်ဆံရေး။ အခြေခံ ICSS တံခါးကနေ (လက်ဝဲ) ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှု။ (ညာ) ကိုကင်းထိုးအရေအတွက်ချင်းစီ session ရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်နာရီအတွင်းမှာရရှိခဲ့သည်။ ...
2 ။ စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအတွက်အာရုံကြောအလွှာ
2.1 ။ compulsive ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိတ်အပိုင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအတွင်း-system ကို neuroadaptations
လျှပ်စစ်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်သို့မဟုတ် intracranial Self-stimulation ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်။ acute အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါအားလုံးသည်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး,, (ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်တံခါးလျော့Kornetsky နှင့် Esposito, 1979) နှင့်အုပ်ချုပ်သည့်အခါနာတာရှည် (အထကျကိုကြည့်ပါ) ရုပ်သိမ်းရေးစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံကိုတိုးမြှင့်။ ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်ဦးနှောက်အတွက်ကျယ်ပြန့် neurocircuitry ကပါဝင်ပတ်သက်, ဒါပေမယ့်နိမ့်ဆုံးတံခါးအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်အရှိဆုံးအထိခိုက်မခံဆိုဒ်များအဆိုပါ Basal forebrain (အတူ ventral tegmental ဧရိယာကိုဆက်သွယ်သော medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏လမ်းကြောင်းပါဝင်ပတ်သက်နေကြားရှိနှင့် Milner, 1954; Koob et al ။ , 1977) ။ အများကြီးအလေးပေးသည့် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးအတွက်ကွှ monoamine စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ပိုင်းတွင်အာရုံစူးစိုက်စဉ်တွင်, medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေးမှာရှိတဲ့တခြား nondopaminergic စနစ်များကိုရှင်းလင်းစွာ (က key ကိုအခန်းကဏ္ဍများဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2006).
အတွင်း-system ကိုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်းမှ neuroadaptations အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရအတူတူ neurocircuits အတွက်တူညီတဲ့ neurotransmitter စနစ်များ function ကိုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းပါဝင်သည်။ တစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့အယူအဆ dopamine စနစ်များထိုကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာအဖြစ်စွဲသံသရာ၏အရေးပါအဆင့်အတွက်စိတ်မချရသောနေကြသည်ကြောင်းနှင့် Non-မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်နှိပ်စက်မူးယစ် (တိုးမြှင် sensitivity ကိုလျော့ကျစေပါတယ်Melis et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်၏ activation (ရှည်လျားသော psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအကြိုးဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အရေးပါဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးအလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်သည့်လူတန်းစားနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့Koob, 1992; di Chiara နှင့်မြောက်, 1992; Nestler, 2005) ။ (ထို mesolimbic dopamine စနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်နျူကလိယအတွက် serotonergic neurotransmission အတွက်လျော့ကျတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ် accumbensRossetti et al ။ , 1992; Weiss et al ။ , 1992, 1996) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလူသားတွေအတွက် imaging လေ့လာမှုများတသမတ်တည်း dopamine: D များ၏နံပါတ်များကိုတာရှည်-တည်မြဲလျှောက်လျော့နည်းပြခဲ့ကြ2 ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် receptors (Volkow et al ။ , 2002) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ (ကလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတစ် pharmacological စိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျှော့ချပါပြီVolkow et al ။ , 1997; Martinez et al ။ , 2007) ။ dopamine: D များ၏အရေအတွက်လျော့ကျ2 သဘာဝကစစ်ကူအားဖြင့်ဆွဖို့ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုအတွက်ကိုကင်း, နီကိုတင်းနှင့်ရက်အလွန်အကျွံသောက်တာရလဒ်များကိုအတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူ coupled receptors, (မာတင်-Solch et al ။ , 2001; Volkow နှင့်မုဆိုး, 2000) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သဘာဝကစစ်ကူများနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆုလာဘ် circuitry ၏ dopamine အစိတ်အပိုင်းများ၏ sensitivity ကိုတစ်ခုခြုံငုံလျှော့ချရေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လူသားတွေအတွက် Psychostimulant ဆုတ်ခွာစိတ်ဓါတ်များလျော့နည်းသွား, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်, psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်နှင့်ဆက်စပ်သည် (သဘာဝဆုလာဘ်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းသွားဘားနှင့် Phillips က, 1999) နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား (Pulvirenti နှင့် Koob, 1993), ပါဝင်စေခြင်းငှါအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ dopaminergic function ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ စိတ်ကြွဆေးဆုတ်ခွာပြပွဲကာလအတွင်းတိရစ္ဆာန်များအဘို့မွှေးကြိုင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်တိုးတက်သော-အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်လျော့နည်းသွား, ဤတုံ့ပြန်လျော့နည်းသွားခြင်း (dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist terguride အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ခဲ့သည်Orsini et al ။ , 2001), အနိမ့် dopamine သေံ psychostimulant ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်စိတ်ခွန်အားနိုးလိုငွေပြမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းအကြံပြု။
ဒီအယူအဆရေးရာမူဘောင်လက်အောက်တွင်အခြားအတွင်း-system ကို neuroadaptations နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အဲဒီ receptor transduction ယန္တရားများ၏တိုးလာ sensitivity ကိုပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်ကုသမှုနှင့်အတူအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ခံယူစေခြင်းငှါ intracellular အချက်ပြလမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောစူးရှအဲဒီ receptor လုပ်ရပ်များရှိသည်။ adenylate cyclase, ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက, သိသိ adenosine monophosphate တုံ့ပြန်မှု-ဒြပ်စင် binding ပရိုတိန်း (CREB), နှင့်ΔFosB opioid ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ် (၏ activationကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1995; Shaw-Lutchman et al ။ , 2002; Nye နှင့် Nestler, 1996; Nestler, 2004) ။ အဆိုပါΔFosBတုံ့ပြန်မှု (ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence သို့ရှည်လျားကိုတိုးချဲ့တဲ့ neuroadaptive ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုဖို့တွေးဆနေပါတယ်Nestler နှင့် Malenka, 2004).
2.2 ။ compulsive ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိတ်အပိုင်းကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းအကြား-system ကို neuroadaptations
arousal-စိတ်ဖိစီးမှုမော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက် neurochemical စနစ်များလည်းထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နာတာရှည်ရှိနေခြင်းကိုကျော်လွှားရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းပုံမှန် function ကို restore လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များ၏ neurocircuitry အတွင်းစေ့စပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့် corticotropin-releasing အချက် (CRF) ကကမကထပြုခဲ့သည့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်ကနှစ်ဦးစလုံးမွငျ့မား adrenocorticotropic ဟော်မုန်း, corticosterone နှင့် amygdala တစ်ဘုံတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူမှီခိုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုအလားအလာနှင့်အတူအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် dysregulated နေကြတယ် စူးရှသောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း CRF (Rivier et al ။ , 1984; Merlo-Pich et al ။ , 1995; Koob et al ။ , 1994; Rasmussen et al ။ , 2000; သံလွင် et al ။ , 2002; Delfs et al ။ , 2000) ။ အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေ acute ရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း CRF ရန် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အားဖြင့်ပြောင်းပြန်နိုင်ထားတဲ့ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောပြည်နယ်ထုတ်လုပ်သည်။
အဆိုပါ neuroanatomical entity (ထိုတိုးချဲ့ amygdala ချေါHeimer နှင့် Alheid, 1991) ဖြစ်စဉ်ကိုအထက်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းသည့်အကြား-system ကိုပြိုင်ဘက်ထုတ်လုပ်ရန် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်များနှင့်အတူဦးနှောက် arousal-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ဘုံခန္ဓာဗေဒအလွှာကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယက, stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ, နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ medial (shell ကို) မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းတစ်ဦးအကူးအပြောင်းဇုန်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဤအဒေသများတစ်ခုချင်းစီ (cytoarchitectural နှင့် circuitry တူညီရှိပါတယ်Heimer နှင့် Alheid, 1991) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ထိုကဲ့သို့သော basolateral amygdala နှင့် hippocampus အဖြစ် limbic အဆောက်အဦများအနေဖြင့်မြောက်မြားစွာ afferents အားလက်ခံတွေ့ဆုံဤသို့နောက်ထပ်ဂန္ထဝင် limbic (စိတ်ခံစားမှု) interface သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများ defining, အ ventral pallidum နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ဖို့ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်း medial တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှ efferents ပို့ပေး အဆိုပါ extrapyramidal မော်တာစနစ်ဖြင့်အဆောက်အဦများ (Alheid et al ။ , 1995) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ရှည်လျားကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမသာ (ရှိသည်ဖို့တွေးဆထားသည်le Doux, 2000) ဒါပေမယ့်လည်းနာကျင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအတွက် (Neugebauer et al ။ , 2004).
2.3 ။ မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှု၏ Neuropharmacological လေ့လာမှုများ
နေရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက် (အများအားဖြင့် opioids များ၏အခြေအနေတွင်, ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုထားပြီးလက် et al ။ , 1988; Stinus et al ။ , 1990) ။ conditional ရာအရပျ preference ကိုမတူဘဲ, opioids မှမိုးရွာသွန်းမှုဆုတ်ခွာလျှက်နေစဉ်အထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ကြွက်နောက်ပိုင်းတွင်ကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တစ်ဦး unpaired ပတ်ဝန်းကျင်အကြားရွေးချယ်မှုနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါဆုတ်ခွာ-တွဲပတ်ဝန်းကျင်တွင်လျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ ဤရွေ့ကားဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှု (နောက်ပိုင်း 24 ရက်သတ္တပတ်မှ 16 ဇထံမှတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်လက် et al ။ , 1988; Stinus et al ။ , 1990, 2000) ။ ထိုအရပ်ကိုခြင်းကိုမနှစ်သက်သည်၎င်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းများအတွက် opioid မှီခို၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့ (ကြည့်ရှုခြင်း (မော်ဖင်းအကိုက်လုံးလေးများဖယ်ရှားပြီးနောက်, ဥပမာ) တိရိစ္ဆာန်များ "detoxified" ဖြစ်ကြောင်းရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ထင်ရှားခံရဖို့ဆက်လက် Baldwin နှင့် Koob, 1993; Stinus et al ။ , 2000) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, opioid-မှီခိုကြွက်များတွင်နေရာတစ်နေရာခြင်းကိုမနှစ်သက်ဆုတ်ခွာ၏ somatic ဆိုင်းဘုတ်များလေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော naloxone ၏ဆေးများနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ် (Schulteis et al ။ , 1994) ။ naloxone သူ့ဟာသူ nondependent ကြွက်များတွင်နေရာတစ်နေရာခြင်းကိုမနှစ်သက်ထုတ်လုပ်ဦးမည်ဖြစ်သော်လည်း, နေရာခြင်းကိုမနှစ်သက်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောတံခါးခုံကိုထိုး (မှီခိုကြွက်များတွင်သိသိသာသာလျော့ကျလက် et al ။ , 1988) ။ ဒီချဉ်းကပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးကမူကွဲအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်စူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်မော်ဖင်းအကိုက်တစ်ခုတည်းစူးရှသောဆေးထိုးပြီးနောက် naloxone ဆေးထိုးအောက်ပါထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
acute opioid မှီခိုအနေနဲ့ opioid agonist (တစ်တစ်ခုတည်းထိုးသို့မဟုတ်ရေတိုရေရှည်စီမံခန့်ခွဲအောက်ပါ opioid ရန်အားဖြင့်ဆုတ်ခွာကဲ့သို့ဆိုင်းဘုတ်များ၏မိုးရွာသွန်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးမာတင်နှင့် Eades, 1964) ။ ကြွက် (စူးရှဆုတ်ခွာတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးအစိတ်အပိုင်းထင်ဟပ်စေတဲ့တစ်ခုတည်းသောမော်ဖင်းအကိုက်ဆေးထိုးပြီးနောက် naloxone တစ်ဦးအနိမ့်ထိုးသဖြင့် precipitated တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ပြသAzar et al ။ , 2003) ။ acute opioid ရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း (ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးထုတ်လုပ်လျူနှင့် Schulteis, 2004အော်ပရေတာအတွက်), ဖိနှိပ်မှုကိုတုံ့ပြန် (Schulteis et al ။ , 2003) နှင့်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္အတွက်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ (Zhang ကနှင့် Schulteis, 2008) ။ အခွအေနေအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခြင်းသည် opioid တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist buprenorphine ထိုး-ရသည်မိုးရွာသွန်းမှု opioid ဆုတ်ခွာထုတ်လုပ်ရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လျော့နည်းသွားသည်။ တစ်ဦး CRF ၏ system administrator1 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်တစ်ဦး peptide CRF တိုက်ရိုက် intracerebral အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 ရန်လည်း (opioid ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျဆန္ဒရှိလျော့နည်းသွားStinus et al ။ , 2005; Heinrich et al ။ , 1995) ။ opioid ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ပိတ်ဆို့ functional noradrenergic ရန် (Delfs et al ။ , 2000).
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း dynorphin ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးအထောက်အထား dynorphin dopaminergic activation တုံ့ပြန်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးလာသည်နှင့်, အလှည့်၌, dynorphin စနစ်များကြောင့် overactivity dopaminergic function ကိုလျော့ချနိုင်သည်ကိုပြသသည်။ κ opioid agonists (ဆန္ဒရှိနေကြသည်မြေယာ et al ။ , 2008; Pfeiffer et al ။ , 1986), နှင့်ကိုကင်း, opioid နှင့်အီသနောဆုတ်ခွာခြင်း (နျူကလိယ accumbens နှင့် / သို့မဟုတ် amygdala အတွက်တိုးမြှင့် dynorphin နှင့်ဆက်စပ်နေသည်Spangler et al ။ , 1993; Lindholm et al ။ , 2000; ကြိမ် et al ။ , 1992).
2.4 ။ မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ၏ Neuropharmacological လေ့လာမှုများ
အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးထံမှစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence အခြားဘုံတုံ့ပြန်မှုစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များစူးရှဆုတ်ခွာစဉ်ကအလွဲသုံးစားမှုများအားလုံးကိုအဓိကမူးယစ်ဆေးမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုထင်ရှားပါပြီ။ အဆိုပါမှီခို variable ကိုမကြာခဏဝတ္ထုနှင့် / သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု, ထိုကဲ့သို့သောလွင်ပြင်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်အားသတ္တုစုံစမ်းစစ်ဆေး၏ခုခံကာကွယ်မွှေးအဖြစ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု, ရန်တက်ကြွသောတုန့်ပြန်နေတဲ့ passive တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုကင်းများ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာ CRF ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပြောင်းပြန်နေကြသည်နှစ်ဦးစလုံး၏မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္နှင့်ကာကွယ်ရေးမွှေးစမ်းသပ်မှု, (တစ် anxiogenic ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်Sarnyai et al ။ , 1995; Basso et al ။ , 1999) ။ opioid မှီခိုအတွက်မိုးရွာသွန်းမှုရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်း (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်Schulteis et al ။ , 1998; Harris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 1993) ။ အီသနောဆုတ်ခွာ CRF ၏ intracerebroventricular အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုထုတ်လုပ်1/ CRF2 peptidergic ရန် (Baldwin et al ။ , 1991), သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး CRF1 ရန် (Knapp et al ။ , 2004; Overstreet et al ။ , 2004; funk et al ။ , 2007), နှင့်တစ်ဦး peptidergic CRF ၏ intracerebral အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 အဆိုပါ amygdala သို့ရန် (Rassnick et al ။ , 1993) ။ intracerebroventricularly သို့မဟုတ်စနစ်တကျထိုးသွင်း CRF ရန်လည်း (နာတာရှည်အီသနောထံမှအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence စဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိဖိအားဖို့ potentiated စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုပိတ်ဆို့Breese et al ။ , 2005; Valdez et al ။ , 2003) ။ CRF ရန်များ၏သက်ရောက်မှုကို (amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီပြီRassnick et al ။ , 1993) ။ နီကိုတင်းကနေမိုးရွာဆုတ်ခွာ (စ CRF ရန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကြောင်းစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်လုပ်Tucci et al ။ , 2003; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007).
3 ။ တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး-ယူပြီးတိုးချဲ့ Access ကိုအတူဘို့အာရုံကြောအလွှာ
3.1 ။ အတွင်း-system ကို neuroadaptations
လေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးအတွက်, dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists သာ psychostimulant ဆုတ်ခွာ reverse မှဒါပေမယ့်လည်းတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ဆက်နွယ် psychostimulant Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးပိတ်ဆို့ဖို့ပြကြပြီမဟုတ်။ Dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists (nondependent ကန့်သတ် access ကို Paradigm အတွက် psychostimulant မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းကျဆင်းIzzo et al ။ , 2001; Pulvirenti et al ။ , 1998) ။ သို့သော်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များတစ် dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist (တစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုပြသWee et al ။ , 2007) ။ တစ်ဦး dopamine D ကိုအုပ်ချုပ် long-access ကိုကြွက်2 တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist (dopamine ရန်နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိရလဒ်များကိုမှအလားတူဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှု function ကို၏လက်ဝဲဘက်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီပြသAhmed ကနှင့် Koob, 2004) ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists လည်း psychostimulant ဆုတ်ခွာ reverse နိုင်ပါတယ် dopamine သောလေ့လာရေးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထိုရလဒ်များ, dopamine သေံ၏ dysregulation မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အလားတူရလဒ်များ opioid တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist buprenorphine နှင့်အတူ opioid မှီခိုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ Buprenorphine ထိုး-ရသည် (opioid-မှီခိုကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့နည်းသွားချန် et al ။ , 2006).
3.2 ။ အကြား-system ကို neuroadaptations
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏တူသော-anxiogenic နှင့်ဆန္ဒရှိကဲ့သို့စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ဖို့ CRF ရန်များ၏စွမ်းရည်ကိုမူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် CRF ရန်၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ CRF ရန်ရွေးချယ်ကင်း၏သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ထပ်တိုးခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့Specio et al ။ , 2008), နီကိုတင်း (ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) နှင့်ဘိန်းဖြူ (Greenwell et al ။ , 2008a) ။ CRF ရန်လည်း (မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနောဒတိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့funk et al ။ , 2007()စားပွဲတင် 2).
မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်၏အခန်းက္ပ။
CRF ၏အုပ်ချုပ်ရေး1 ရန်စနစ်တကျတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ဆက်နွယ်ကင်း၏တိုးချဲ့ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းပြန်, ဤမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန် (Short-access ကို Self-အုပ်ချုပ်ရေးလျော့နည်းသွားသောသူတို့ထက်နိမ့်ခဲ့ရန်ဆေးများမှာSpecio et al ။ , 2008) ။6ဇ access ကိုကြွက်တည်ငြိမ်ကျန်ရစ်သော်လည်းဒီနေရာမှာကင်းဖို့ 1 ဇ access ကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြွက်, အချိန်ကျော်ကင်းစားသုံးမှုအတွက်တိုးပြသခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားသော CRF1 ရန် (တိုတောင်း-access ကိုကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့သောသူတို့ထက်နိမ့်ဆေးများမှာရှည်လျား-access ကိုကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့Specio et al ။ , 2008).
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, တိုးချဲ့ amygdala ၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက် CRF opioid ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုဆိုးကျိုးများအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အဆိုပါရွေးချယ် CRF1 ရန် antalarmin (မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင် naloxone ထုတ်လုပ်ရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပိတ်ဆို့Stinus et al ။ , 2005) ။ CRF1 နောက်ကောက်ကြွက် (opioid ဆုတ်ခွာဖို့အခွအေနေအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်ပြသရန်ပျက်ကွက်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် mRNA dynorphin အတွက် opioid-သွေးဆောင်တိုးပြသရန်ပျက်ကွက်Contarino နှင့် Papaleo, 2005) ။ CRF1 ရန်လည်းရွေးချယ်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူဘိန်းဖြူ-မှီခိုကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုး (ကိုပိတ်ဆို့ထားGreenwell et al ။ , 2008a).
ဒါ့အပြင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ဦး CRF ပိတ်ဆို့ခဲ့နာတာရှည်နီကိုတင်းကိုထုတ်လုပ် anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများအနေဖြင့်ဆုတ်ခွာ precipitated1 အဲဒီ receptor ရန် (ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) နှင့်တစ်ဦး CRF ရန်အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ခဲ့ဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုး (Bruijnzeel et al ။ , 2007) ။ Extracellular CRF (နာတာရှည်နီကိုတင်းကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း amygdala အတွက်တိုးမြှင့်ခံရဖို့ပြသထားသည်ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) ။ တစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေ CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းနှင့်ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်နှင့် (အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သော phenotype ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်တိုးလာSlawecki et al ။ , 2005) ။ တစ်ဦး CRF ၏ system administrator1 ရန် (တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့် (23 ဇ) တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နီကိုတင်း၏တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ Basal forebrain အတွက် CRF လည်းကင်း, ဘိန်းဖြူများနှင့်နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးရှာကြံမောင်းသောဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိစေခြင်းငှါ။ အကြံပြု
မှီခိုအတွက် CRF များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထင်ရှားသောဥပမာမှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း extrahypothalamic CRF စနစ်များကိုမှီခိုကြွက် (များ၏ stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း extracellular CRF တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်, hyperactive ဖြစ်လာfunk et al ။ , 2006; Merlo-Pich et al ။ , 1995; သံလွင် et al ။ , 2002) ။ ဦးနှောက် CRF စနစ်များ၏ dysregulation အဆိုပါတိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူဒါပေမယ့်လည်းအီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးမသာအခြေခံမှတွေးဆသည်။ ဒီအယူအဆ, အ -helical CRF supporting9-41 နဲ့ D-ဖီ CRF12-41 (intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး) (မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချValdez et al ။ , 2004) ။ နာတာရှည်အီသနောငွေ့၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာမှ exposure စူးရှဆုတ်ခွာစဉ်နှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence (2 ရက်သတ္တပတ် Post-စူးရှရုပ်သိမ်းရေး) စဉ်အတွင်းနှစ်ဦးစလုံးကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးထုတ်လုပ် (O'Dell et al ။ , 2004; Rimondini et al ။ , 2002) ။ တစ်ဦး CRF ၏ Intracerebroventricular အုပ်ချုပ်ရေး1/ CRF2 ရန် (စူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး abstinence နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးပိတ်ဆို့Valdez et al ။ , 2004) ။ တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယတစ်ဦး CRF သို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အခါ1/ CRF2 အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်ရန်ပိတ်ဆို့အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး (funk et al ။ , 2006, 2007) ။ သေးငယ်တဲ့-မော်လီကျူး CRF ၏စနစ်ထိုး1 ရန်လည်းစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှုပိတ်ဆို့ (Knapp et al ။ , 2004; Overstreet et al ။ , 2004; funk et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖြန်ဖြေအတွက်အဓိက amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း CRF များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒီထက်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးသော်လည်း, သက်သေအထောက်အထားမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်နှင့်တိုးမြှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တိုးချဲ့ amygdala အတွက် norepinephrine စနစ်များတစ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်တည်ရှိ။ Norepinephrine functional ဖြစ်စေရန် (β1 ရန်နှင့်α2 အဆိုပါ stria terminalis များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အိပ်ရာနျူကလိယမိုးရွာသွန်းမှု opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျဆန္ဒရှိပိတ်ဆို့သို့ agonist) (ထိုးသွင်းDelfs et al ။ , 2000) ။ opioid ဆုတ်ခွာများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက် norepinephrine များ၏သက်ရောက်မှုများ ventral noradrenergic စနစ်ကပါဝငျသညျ။ opioid ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျဆန္ဒရှိ attenuated Ventral noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေးကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Delfs et al ။ , 2000), ဒါပေမယ့် neurotoxin 6-hydroxydopamine အတူ locus coeruleus ထံမှ dorsal noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏နီးပါးပြည့်စုံကိုတွေ့ရှိရပါသည် opioid ဆုတ်ခွာထုတ်လုပ်ရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပိတ်ဆို့ဖို့ပျက်ကွက် (Caille et al ။ , 1999) ။ functional norepinephrine ရန် (အီသနောအပေါ်မှီခိုနေနှင့်ဆက်စပ်အလွန်အကျွံမူးယစ်စားသုံးမှုပိတ်ဆို့Walker က et al ။ , 2008), ကိုကင်း (Wee et al ။ , 2008), နှင့် opioids (Greenwell et al ။ , 2008b) ။ ဤအဆိုးကျိုးများအများအပြားများအတွက်တစ်ဦးက Focal Point သည်တိုးချဲ့ amygdala ပေမယ် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၏အဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Dynorphin, opioid receptors κဖို့ချည်နှောင်ထားတဲ့ opioid peptide κ, ရှည်လျား psychostimulants နှင့် opioids (များ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ activation ပြသရန်လူသိများခဲ့ပြီးNestler, 2004; Koob, 2008), နှင့်κ opioid agonists (တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားအတွက်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်Mucha နှင့် Herz, 1985; Pfeiffer et al ။ , 1986) ။ တစ်ဦးကκ opioid ရန်လုပ်ကွက်အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မှီခို (နဲ့အတူဆက်စပ်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းWalker ကနှင့် Koob, 2008) ။ သက်သေအထောက်အထား (κအဲဒီ receptor activation CRF လွှတ်ပေးရန်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုပြသသီချင်းနှင့် Takemori, 1992), ဒါပေမယ့်မကြာသေးခင်ကအချို့ (CRF စနစ်များကို Activation မှတဆင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များထုတ်လုပ် dynorphin ၏သက်ရောက်မှုကမကထပြုခဲ့ကြသည်ဟုစောဒကပါပြီမြေယာ et al ။ , 2008).
စိန်ခေါ်မှုဖို့ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်ကတုန့်ပြန်၏ dynamic သဘောသဘာဝဗဟိုအာရုံကြောစနစ် CRF စနစ်များနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် norepinephrine စနစ်များ၏သိသာအပြန်အလှန်အားဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည်။ အဆိုပါ pons နှင့် Basal forebrain ၏မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်မှာ feed ကို-ရှေ့ဆက် system အဖြစ် Conceptualized, CRF norepinephrine မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း, အလှည့်အတွက် norepinephrine (CRF မြှင့်လုပ်ဆောင်Koob, 1999) ။ အများကြီး pharmacologic, ဖြစ်စဉ်နှင့်ခန္ဓာဗေဒသက်သေအထောက်အထား (ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက် locus coeruleus ၏ဒေသတွင်း၌တစ်ဦး CRF-norepinephrine အပြန်အလှန်များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါသည်Valentino et al ။ , 1991, 1993; ဗန် Bockstaele et al ။ , 1998) ။ သို့သော် norepinephrine အစကို (hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် CRF လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်Alonso et al ။ , 1986), အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယကို၎င်း, amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ။ ထိုသို့သောအစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်စနစ်များ (နောက်ထပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုသက်ရှိရဲ့တုံ့ပြန်မှုစည်းရုံးဘို့အစွမ်းထက်အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုရှိသည်ဖို့တွေးဆခဲ့ကြပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားရောဂါဗေဒမှအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်Koob, 1999).
Neuropeptide Y ကို (NPY) (ပု amygdala မှဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောသိသိသာသာ anxiolytic ကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဦး neuropeptide သည်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်အတွက် CRF မှဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့တွေးဆထားသည်Heilig နှင့် Koob, 2007) ။ သိသာထင်ရှားသောအထောက်အထား amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် NPY ၏ activation နာတာရှည်အီသနောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှီခိုမှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ intracerebroventricularly အုပ်ချုပ် NPY (အီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပိတ်ဆို့Thorsell et al ။ , 2005a, b) ။ တိုက်ရိုက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ NPY ၏ injection (Gilpin et al ။ , 2008အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် NPY ၏) နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကို-တိုးမြှင်စကားရပ်တွင် (အီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပိတ်ဆို့Thorsell et al ။ , 2007).
ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများထံမှစူးရှဆုတ်ခွာစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်မှီခိုသူနဲ့ဆက်စပ်တိုးမြှင့မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု (များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများဘို့စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုရှိပြီးသော amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် CRF တိုးပွါးပုံ 6) ။ acute ရုပ်သိမ်းရေးကိုလည်းနျူကလိယ accumbens အတွက် stria terminalis နှင့် dynorphin ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် norepinephrine များလွှတ်ပေးရန်ကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, မှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်နှစ်ဦးစလုံး၏။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် NPY ၏လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအီသနောမှီခိုနှင့်အတူဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဦးနှောက် Anti-စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (NPY) ၏ inactivation နှင့်အတူပေါင်းစပ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (CRF, norepinephrine, dynorphin) ၏ activation အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက်အစွမ်းထက်စိတ်ခံစားမှု dysregulation elicits ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏ထိုကဲ့သို့သော dysregulation မှီခိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုကြာရှည်ပြည်နယ်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ဇာတ်စင် set ကိုကူညီသောအကြား-system ကိုပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်များမှသိသာအလှူငွေဖြစ်နိုင်သည်။
အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုများ၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ခြင်းနှင့်မည်သို့မှီခိုမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေမှယူ nondependent မူးယစ်ဆေးဝါးကနေအကူးအပြောင်းအတွက်ကိုပြောင်းလဲ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ် Neurocircuitry ။ အကျိုးကို၏ Key ကိုဒြပ်စင် ...
4 ။ စွဲလမ်းအတွက် compulsive: An allostatic အမြင်
စွဲလမ်းအတွက် compulsive တိုးမြှင့်မက်လုံးပေး salience, အလေ့အထ function ကို၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်ချို့ယွင်းအပါအဝင်မျိုးစုံရင်းမြစ်များမှရရှိနိုငျသညျ။ သို့သော်ဤသတင်းရင်းမြစ်များ၏အသီးအသီးအခြေခံပြင်းပြင်းထန်ထန် compulsive အပေါ် impact စေခြင်းငှါအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်း၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်မောင်းသောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စွဲလမ်း၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" (အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးKoob နှင့် Le Moal, 2005, 2008) နှင့်ဖြစ်တွေးဆနေပါတယ် b-ဖြစ်စဉ်ကို အခါပြိုင်ဘက်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်လူသိများသည့် hedonic ပြောင်းလဲနေသော၏ တစ်ဦး-ဖြစ်စဉ်ကို Euphoria ပီတိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပါဝင်သည်သောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် ဆုတ်ခွာ / အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက် ဇာတ်စင်ထိုကဲ့သို့သောနာတာရှည်ယားယံခြင်း, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု, အကျပ်အတည်းများကြောင့်သာဖြစ်လေသည်, dysphoria, alexithymia, နှင့်သဘာဆုလာဘ်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏အရှုံးအဖြစ် key ကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဒြပ်စင်ပါဝင်ပါသည်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုအားလုံးအဓိကမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံအတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်များအတွက် neurobiological အခြေခံဖွဲ့စည်းတွေးဆကြသည် b-ဖြစ်စဉ်ကို: အကျိုးကိုစနစ်များအတွက် function ကိုဆုံးရှုံး (အတွင်း-system ကို neuroadaptation) နှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ် Anti-ဆုလာဘ်စနစ်များစုဆောင်းမှု (အကြား-system ကို neuroadaptation) (Koob နှင့် Bloom, 1988; Koob နှင့် Le Moal, 1997) ။ anti-ဆုလာဘ်ဦးနှောက်စနစ်များ (ဆုလာဘ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ရာအရပျ၌ရှိကြ၏သောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်Koob နှင့် Le Moal, 2008) ။ မှီခိုနှင့်ဆုတ်ခွာဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော CRF, norepinephrine နှင့် dynorphin အဖြစ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များ (ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့ပြည်နယ်များကိုထုတ်လုပ်စုဆောင်းနေကြသည်Koob, 2003; Nestler, 2001; Aston-ဂျုံးစ် et al ။ , 1999) ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း ventral striatum-တိုးချဲ့ amygdala များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်အတွင်းမှာဆုလာဘ် function ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ Anti-ဆုလာဘ်စနစ်များဆုလာဘ် neurotransmitter function ကိုနှင့်စုဆောင်းမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်းများ၏ပေါင်းစပ် compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်း (ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်တဲ့အင်အားကြီးအရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပုံ 6).
တစ်ခုခြုံငုံအယူအဆရေးရာဆောင်ပုဒ်မူးယစ်ဆေးစွဲတိရစ္ဆာန်၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ထိန်းညှိကြောင်း homeostatic ဦးနှောက်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူတစ်ချိုးကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းဤနေရာတွင်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ dysregulation ယင်းမူးရူးနှင့်နောက်ဆက်တွဲစူးရှရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူစတင်ပေမယ့်ပင်လနှင့်နှစ်ပေါင်း detoxification နှင့်နေကြပြီးလျင်မြန်စွာ "re-စွဲ" ခွင့်ပြုမယ့်ကျန်နေတဲ့ neuroadaptive သဲလွန်စထွက်ခွာမည်။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏စိတ်ခံစားမှု dysregulation hedonic function ကို၏ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး homeostatic dysregulation ထက်ပိုမိုကိုယ်စားပြု; ဒါကြောင့်လည်း allostasis ချေါခဲ့ပြီးသောဤစနစ်၏ homeostasis အတူပြောင်းလဲနေသောချိုးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
Allostasis, မူလက arousal နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ function ကို၏ persistent ရောဂါရှင်းပြဖို့ conceptualized "ပြောင်းလဲမှုကတဆင့်တည်ငြိမ်ရေး။ " အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် Allostasis ဝေးပိုမိုရှုပ်ထွေး homeostasis ထက်ဖြစ်ပြီးအများအပြားထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများ (ရှိပါတယ်Sterling နှင့် Eyer, 1988) ။ Allostasis အသစ်တစ်စုံအချက်များဆီသို့အားလုံး parameters တွေကိုလိုအပ်နေခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပွနျလညျပွုပွငျပြန်လည်အကဲဖြတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အတူမဟုတ်ဘဲ homeostasis ၏အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများထက် feed ကို-ရှေ့ဆက်ယန္တရားပါဝငျသညျ။ တစ်ဦး allostatic ပြည်နယ် ယင်း၏သာမန် (homeostatic) လည်ပတ်မှုအဆင့်ကနေစည်းမျဉ်းစနစ်၏နာတာရှည်သှဖေတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Allostatic ဝန် ကို "အချိန်ကိုကျော်စုဆောင်းနှင့်ရောဂါဗေဒပြည်နယ်များမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစုစည်းနေခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း allostasis ၏ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်" (အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရMcEwen, 2000).
Allostatic ယန္တရားများ (စွဲလမ်း၏ရောဂါဗေဒအဘို့အဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်တဲ့ functioning ဦးနှောက်ဆုလာဘ် system ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့တွေးဆခဲ့ကြKoob နှင့် Le Moal, 2001) ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်က transmitter နှင့်ဆားကစ်၏ overactivation နှင့်ဦးနှောက် Anti-ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးမှုစနစ်များစုဆောင်းမှုနှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ဦးနှောက်မှစိန်ခေါ်မှုများကိုထိန်းညှိဖို့တွေးဆနေကြပါတယ်။ လုံလောက်သောအချိန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ကြောင်းတုန့်ပြန် (ဥပမာအ brainstem အတွက် CRF နှင့် norepinephrine အကြားအပြန်အလှန်နှင့် Basal forebrain ပိတ်ထားဖို့ကိုမရရှိနိုင်လျှင်ထို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုမှလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုခွင့်ပြုသောအလွန်ဇီဝကမ္မယန္တရားရောဂါဗေဒ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်လာ ရောဂါဗေဒစိုးရိမ်စိတ်) (Koob, 1999).
ထိုကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအဖြစ်ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိန်ခေါ်မှုများ, တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သော်လည်းကုန်ကျစရိတ်မှာရန်, မော်လီကျူးဆယ်လူလာနှင့် neurocircuitry အပြောင်းအလဲများကနေတစ်ဆင့်ဦးနှောက်ရဲ့ကြိုးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမူဘောင်များအတွက်ဤနေရာတွင်တံခါးခုံကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတခုချေါဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ကနေကျန်နေတဲ့သွေဖည်အသေးစိတ်ရှင်းလင်း allostatic ပြည်နယ်။ ဤသည်ပြည်နယ်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေ၏ compulsive ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှစ်ဦးစလုံး၏ဆုလာဘ်ဆားကစ်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဆုလာဘ်စနစ်များစုဆောင်းမှု၏လျော့နည်းသွား function ကိုကမီးလောင်ရာဆုလာဘ် set ကို point ရဲ့နာတာရှည်မြင့်ပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဤအစနစ်များ ventral striatum နှင့်တိုးချဲ့ amygdala စီမံကိန်းကိုစိတ်ခံစားမှု valence, အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်ချို့ယွင်းဆက်စပ်သည့်မှတ်ဥာဏ်ဒိုမိန်းပေါ်တွင်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များသက်ရောက်မှုများမည်သို့ dysregulation သိရှိစေရန်ရှိရာ Basal forebrain မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီသည်အခြားလူသိများသောဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များအားဖြင့် modulated နေကြသည်ကိုဘယ်လိုများနှင့် ဘယ်လိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကဤဆားကစ်ပေါ်မှာတင်သိရှိစေရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏မော်လီကျူး-မျိုးရိုးဗီဇအဆင့်မှာကွာခြားအနာဂတ်သုတေသနများအတွက်စိန်ခေါ်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထူးချွန်အကူအညီအတွက်မိုက်ကယ် Arends နှင့် Mellany ဆန်းတို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ သုတေသနကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ဟာဆီးချိုရောဂါနှင့် Digestive အမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါများအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေအရက်အလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုနှင့်အရက်, DA06420, DA08459 နှင့် DA10072 ထံမှ AA04043 နှင့် AA04398 ပေးအပ်နှင့် DK26741 ကထောက်ခံခဲ့သည်။ သုတေသနမှာလည်းအရက်နှင့်စွဲလမ်းမှုသုတေသနများအတွက် Pearson ရေးစင်တာတို့ကထောက်ခံခဲ့သည်။ ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှကနေထုတ်ဝေအရေအတွက်ကို 19480 ဖြစ်ပါတယ်။
Ahmed က SH, Kenny PJ, Koob gf, မြင့်တက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် hedonic allostasis များအတွက် Markou အေ Neurobiological သက်သေအထောက်အထား။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2002; 5: 625-626 ။ [PubMed]
Ahmed က SH, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်တင်းမာမှုလျှော့ချပြီးနောက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် set ကိုအမှတ်အတွက်ကြာရှည်တိုး။ Psychopharmacology ။ 1999; 146: 303-312 ။ [PubMed]
Ahmed က SH, Koob gf ။ ကိုကင်းစားသုံးမှုမြင့်တက်နှင့်အတူကြွက်တစ် dopamine ရန်တုန့်ပြန်အပြောင်းအလဲများ။ Psychopharmacology ။ 2004; 172: 450-454 ။ [PubMed]
Alheid gf, De Olmos JS, Beltramino CA. Amygdala နှင့်တိုးချဲ့ amygdala ။ ခုနှစ်တွင်: Paxinos, G, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါ Rat အာရုံကြောစနစ်။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; San Diego မှ: 1995 ။ စစ။ 495-578 ။
Allen ကတီဂျေ, Moeller အပြည်ပြည်သွား, Rhoades HM, Cherek DR ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ Impulse နှင့်သမိုင်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 1998; 50: 137-145 ။ [PubMed]
Alonso, G, Szafarczyk တစ်ဦးက, Balmefrezol M က, ကြွက်များတွင် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းနှင့် vasopressin secreting အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ parvocellular အာရုံခံ၏ ventral noradrenergic ဆော့ဝဲအစုအဝေးတို့က stimulatory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Assenmacher ဗြဲ Immunocytochemical သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1986; 397: 297-307 ။ [PubMed]
American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။4။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2000 ။
Aston-ဂျုံးစ်, G, Delfs JM, Druhan J ကို, Zhu Y. အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ: opiate ရုပ်သိမ်းရေးအတွက် noradrenergic လုပ်ရပ်များများအတွက်ပစ်မှတ် site ကို။ ခုနှစ်တွင်: McGinty JF, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ Amygdala ဖို့ Ventral Striatum ကနေတိုးတက်: Neuropsychiatry နှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 1999 ။ စစ။ 486-498 ။ (စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, vol 877) [PubMed]
Azar MR, ဂျုံးစ်ဘီစီ, Schulteis G. အခွအေနမြေားရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်စူးရှ opioid မှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာတစ်အလွန်အမင်းထိခိုက်မခံတဲ့အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 2003; 170: 42-50 ။ [PubMed]
Baldwin HA, Koob gf ။ ကြွက်များတွင် conditional opiate ဆုတ်ခွာ၏လျင်မြန်သော induction ။ Neuropsychopharmacology ။ 1993; 8: 15-21 ။ [PubMed]
Baldwin HA, Rassnick S က, Rivier J ကို, Koob gf, Britton KT ။ CRF ရန်ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာရန် "anxiogenic" တုန့်ပြန်နောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology ။ 1991; 103: 227-232 ။ [PubMed]
ဘားလေး, Phillips က AG က။ အားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် sucrose ဖြေရှင်းချက်များအတွက်တုံ့ပြန်ဃ-စိတ်ကြွဆေးလျှောက်လျော့နည်းဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့အောက်ပါဆုတ်ခွာ။ Psychopharmacology ။ 1999; 141: 99-106 ။ [PubMed]
Basso လေး, Spina M က, Rivier J ကို, ခြိုငျ့ W က, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်ရန်ကြွက်များတွင်နာတာရှည်ကင်းအောက်ပါမြင့်မားသောပေါင်း-ဝင်္အတွက်ခုခံကာကွယ်မွှေးပါရာဒိုင်းရှိ "anxiogenic-ကဲ့သို့" အကျိုးသက်ရောက်မှု attenuates ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ Psychopharmacology ။ 1999; 145: 21-30 ။ [PubMed]
Breiter HC, Gollub RL, Weisskoff RM, ကနေဒီ DN, Makris N ကို, Berke JD, Goodman JM, Kantor HL, Gastfriend DR, Riorden JP, Mathew RT ကို, ရို BR, Hyman SE ။ လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1997; 19: 591-611 ။ [PubMed]
Bruijnzeel AW, Marcinkiewcz ကို C, ဣဇာက်က S, Booth ဟာ MM, ဒဲနစ် DM, ရွှေက MS ။ ကြွက်များတွင် fentanyl ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ် buprenorphine ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 931-941 ။ [PubMed]
Caille S က, Espejo EF, Reneric JP, Cador M က, Koob gf, အ locus coeruleus ၏ noradrenergic အာရုံခံ၏ Stinus အယ်လ်စုစုပေါင်း neurochemical ကိုတွေ့ရှိရပါသည် naloxone-precipitated သို့မဟုတ်အလိုအလျောက် opiate ဆုတ်ခွာဖြစ်စေပြောင်းလဲပစ်မထားဘူးမျှမက opiate ဆုတ်ခွာ reverse မှ clonidine ၏စွမ်းရည်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးထားဘူး ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1999; 290: 881-892 ။ [PubMed]
Chen က SA, O'Dell L ကို, Hoefer M က, Greenwell TN, Zorrilla EP, Koob gf ။ ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ Unlimited လက်လှမ်း: opiate မှီခို၏လွတ်လပ်သောစိတ်ခွန်အားနိုးအမှတ်အသားများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 2692-2707 ။ [corrigedum: 31, 2802] [PubMed]
Contarino တစ်ဦးက, Papaleo အက်ဖ်အဆိုပါ corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor-1 လမ်းကြောင်း opiate ဆုတ်ခွာ၏အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်များ mediates ။ သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2005; 102: 18649-18654 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Deroche V ကို, Le Moal က M, Piazza PV ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး၏မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများတိုးပွားစေပါသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1999; 11: 2731-2736 ။ [PubMed]
Deroche-Gamonet V ကို, ဘီးလင်း: D, Piazza PV ။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-1017 ။ [PubMed]
di Chiara, G, မြောက်အမေရိက RA ။ opiate အလွဲသုံးစားမှု Neurobiology ။ Pharmacological သိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1992; 13: 185-193 ။ [PubMed]
Fillmore MT, Rush CR ။ နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အပြုအမူ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုချို့ယွင်း။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 2002; 66: 265-273 ။ [PubMed]
funk CK, O'Dell LE, ခရော EF, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွင်း Corticotropin-releasing အချက်ဆုတ်ခွာ, အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်တိုးမြှင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး mediates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 11324-11332 ။ [PubMed]
funk CK, Zorrilla EP, Lee က MJ, ဆန် KC, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက် 1 ရန်ရွေးချယ်အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဟားဗတ်။ 2007; 61: 78-86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gardner EL, Vorel SR ။ Cannabinoid ဂီယာနှင့်ဆုလာဘ်-related ဖြစ်ရပ်များ။ ရောဂါ၏ Neurobiology ။ 1998; 5: 502-533 ။ [PubMed]
ဂျော့ခ်ျအို Ghozland S က, Azar MR, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Parsons LH, O'Dell LE ရစ်ချတ်ဆင် HN, Koob gf ။ CRF-CRF1 system ကို activation နီကိုတင်း-မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2007; 104: 17198-17203 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gilpin ဘရစ်ချတ်ဆင် HN, Lumeng L ကို, Koob gf ။ အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်နှင့် outbred Wistar ကြွက်များအားဖြင့်မှီခို-သွေးဆောင်အရက်သောက်ခြင်း။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန; 2008 ။ (စာနယ်ဇင်းများတွင်) [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အစိမ်းရောင် L ကို, Fristoe N ကို, နှောင့်နှေးရလဒ်များအကြားရွေးချယ်မှုအတွက် Myerson ဂျေယာယီလျှော့ခြင်းနှင့် preference ကိုပြောင်းပြန်။ Psychonomic သတင်းလွှာနဲ့သုံးသပ်ချက်များ။ 1994; 1: 383-389 ။ [PubMed]
Greenwell TN, Funk CK, ဝါဂွမ်း P ကိုရစ်ချတ်ဆင် HN, Chen က SA, ဆန် K သည်, Lee က MJ, Zorrilla EP, Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်-1 အဲဒီ receptor ရန် long- ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့ပေမယ့်မရရေတို access ကိုကြွက်များ။ စွဲဇီဝဗေဒ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2008a ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Greenwell TN, Walker က BM, ဝါဂွမ်း P ကို, Zorrilla EP, Koob gf ။ အဆိုပါα1 adrenergic အဲဒီ receptor ရန် prazosin ဘိန်းဖြူအုပ်ချုပ်ရေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2008b ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လက် TH, Koob gf, Stinus L ကို, opiate အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏က Le Moal အမ်ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများ: နုံနဲ့မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင်သီးသန့်ဗဟိုဖျန်ဖြေခြင်းအဘို့အထောကျအထား။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1988; 474: 364-368 ။ [PubMed]
Harris က GC, Aston-ဂျုံးစ် G. အβ-Adrenergic ရန် cocaine- နှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-မှီခိုကြွက်များတွင်ငွေထုတ်စိုးရိမ်စိတ် attenuate ။ Psychopharmacology ။ 1993; 113: 131-136 ။ [PubMed]
Hebb DO ။ စိတ်ပညာ၏ကျောင်းစာအုပ်။3။ WB Saunders; Philadelphia တွင်: 1972 ။
Heilig M က, Koob gf ။ အရက်မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဘို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2007; 30: 399-406 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Heimer L ကို, Alheid G. အ Basal forebrain ခန္ဓာဗေဒ၏ပဟေဠိအတူတကွ Piecing ။ ခုနှစ်တွင်: Napier TC, Kalivas PW, Hanin ငါအယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါ Basal Forebrain: ခန္ဓာဗေဒ function ရန်။ Plenum စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1991 ။ စစ။ 1-42 ။ (စီးရီးခေါင်းစဉ်: စမ်းသပ်ဆေးပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနှင့်ဇီဝဗေဒ, vol 295)
အဆိုပါ amygdala အတွက် Heinrich SC, Menzaghi က F, Schulteis, G, Koob gf, corticotropin-releasing အချက်၏ Stinus အယ်လ်နှိမ်နင်းရေးမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ attenuates ။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 1995; 6: 74-80 ။ [PubMed]
neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များ: ဟာနန်ဒက်ဇ်, G, Hamdani S က, Rajabi H ကို, Conover K ကို Stewart က J ကို, Arvanitogiannis တစ်ဦးက, Shizgal P. ကြွက် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး၏အကြိုးဆွတာရှညျ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 120: 888-904 ။ [PubMed]
Izzo အီး, Orsini ကို C, Koob gf, Pulvirenti L. တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားထဲမှာတစ်ဦးက dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist နှင့်ရန်ဘလောက်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 68: 701-708 ။ [PubMed]
Kenny PJ, Chen က SA, Kitamura အို Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ အေးစက်ဆုတ်ခွာဘိန်းဖြူသုံးစွဲမှုမောင်းနှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 5894-5900 ။ [PubMed]
Kenny PJ, Poly ငါ Koob gf, Markou အေအနိမျ့ထိုးကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးယာယီတိုးပွါးပေမယ့်မြင့်မားတဲ့ထိုးကင်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုလျော့နည်းစေပါသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2003; 17: 191-195 ။ [PubMed]
Kitamura အို Wee က S, Specio SE, Koob gf, ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Pulvirenti အယ်လ်စက်လှေကား: တစ်ထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှု function ကို။ Psychopharmacology ။ 2006; 186: 48-53 ။ [PubMed]
Koob gf ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး: ခန္ဓာဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ function ကို။ Pharmacological သိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1992; 13: 177-184 ။ [PubMed]
Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်, norepinephrine နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု။ ဟားဗတ်။ 1999; 46: 1167-1180 ။ [PubMed]
Koob gf ။ စွဲလမ်း၏ Neuroadaptive ယန္တရားများ: အတိုးချဲ့ amygdala အပေါ်လေ့လာမှုများ။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology ။ 2003; 13: 442-452 ။ [PubMed]
Koob gf ။ လှုံ့ဆျောမှု၏ Allostatic အမြင်: psychopathology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Bevins RA, Bardo MT, အယ်ဒီတာများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ Etiology အတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များ။ Nebraska စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; လင်ကွန်း NE: 2004 ။ စစ။ 1-18 ။ (စီးရီးခေါင်းစဉ်: Motivation အပေါ် Nebraska စာတမ်းဖတ်ပွဲ, vol 50)
Koob gf ။ စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုစနစ်များကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 11-34 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf, Heinrich SC, Menzaghi က F, Pich EM, Britton KT ။ Corticotropin အချက်, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အပြုအမူလွှတ်။ အဆိုပါ neuroscience အတွက်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ။ 1994; 6: 221-229 ။
Koob gf, ဆုလာဘ် neurocircuitry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ "မှောင်မိုက်ဘက်" ၏သည် Le Moal အမ်ပလပ်စတစ်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 8: 1442-1444 ။ [PubMed]
Koob gf, Le Moal အမ်စွဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008; 59: 29-53 ။ [PubMed]
Koob gf, တောင်ပံကစားသမား GD, Meyerhoff JL, forebrain နှင့်ဦးနှောက်ကို stem loci ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ Self-stimulation အပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး၏ Annau Z. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1977; 137: 109-126 ။ [PubMed]
Kornetsky ကို C, Esposito ru ။ Euphorigenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ: ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုလမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှု။ အဖွဲ့ချုပ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ 1979; 38: 2473-2476 ။ [PubMed]
မြေယာ BB, Bruchas MR, Lemos JC, Xu M က, Melief EJ, Chavkin C. စိတ်ဖိစီးမှု၏ dysphoric အစိတ်အပိုင်း dynorphin Kappa-opioid စနစ်၏ activation အားဖြင့် encoded ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28: 407-414 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
le Doux je ။ ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုဆားကစ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2000; 23: 155-184 ။ [PubMed]
လျူ J ကို, Schulteis G. အဦးနှောက်ဆုလာဘ်လိုငွေပြမှုစူးရှ opioid မှီခိုရာမှ naloxone-precipitated ဆုတ်ခွာအတူလိုက်ပါ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 79: 101-108 ။ [PubMed]
Logan GD, Schachar RJ, Tannock R. Impulse နှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 1997; 8: 60-64 ။
Mantsch JR, Yuferov V ကို, Mathieu-Kia လေး, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်ဦးနှောက် mRNA အဆင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်အနိမ့်ကိုကင်းဆေးများနှိုင်းယှဉ်မြင့်မားဖို့တိုးချဲ့သုံးစွဲနိုင်၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 2004; 175: 26-36 ။ [PubMed]
Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ post-ကင်း anhedonia: ကင်းဆုတ်ခွာ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 1991; 4: 17-26 ။ [PubMed]
Markou တစ်ဦးက, Koob gf ။ ဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ် Intracranial Self-stimulation တံခါးခုံ။ ခုနှစ်တွင်: Sahgal တစ်ဦးက, အယ်ဒီတာ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ: လက်တွေ့ချဉ်းကပ်။ vol ။2။ IRL စာနယ်ဇင်း; အောက်စဖို့ဒ: 1993 ။ စစ။ 93-115 ။
မာတင် WR, Eades CG ။ အဆိုပါနာတာရှည်ကျောရိုးခွေးအတွက်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုအကြားတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1964; 146: 385-394 ။ [PubMed]
Martinez: D, Narendran R ကို, Foltin RW, Slifstein M က, Hwang DR, Broft တစ်ဦးက, Huang က Y ကို, Cooper ကတီဘီ, Fischman မဂ္ဂါဝပ်, Kleber HD ကို Laruelle အမ်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: သိသိသာသာကင်းမှီခိုအတွက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေနှင့်ဖို့ရှေးခယျြမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2007; 164: 622-629 ။ [PubMed]
မာတင်-Solch ကို C, Magyar S က, Kunig, G, Missimer J ကို, Schultz W က, Leenders KL ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ကို Activation အတွက်အပြောင်းအလဲများ: တစ် positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ စမ်းသပ်ဆဲဦးနှောက်သုတေသန။ 2001; 139: 278-286 ။ [PubMed]
McEwen BS ။ Allostasis နှင့် allostatic ဝန်: neuropsychopharmacology များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 108-124 ။ [PubMed]
Melis M က, Spiga S ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဒိုင်ယာနာအမ်အဆိုပါ dopamine အယူအဆ: hypodopaminergic ပြည်နယ်။ Neurobiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2005; 63: 101-154 ။ [PubMed]
Merlo-Pich အီး, Lorang M က, Yeganeh M က, Rodriguez က de Fonseca က F, Raber J ကို, Koob gf, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကနိုးကြွက်များ၏ amygdala အတွက် extracellular corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆင့်ဆင့်၏ Weiss အက်ဖ်တိုးတက်တိုင်းတာအဖြစ် microdialysis ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1995; 15: 5439-5447 ။ [PubMed]
Moeller အပြည်ပြည်သွား, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC အ။ Impulse ၏စိတ်ရောဂါရှုထောင့်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2001; 158: 1783-1793 ။ [PubMed]
Mucha RF, နေရာနှင့်အရသာ preference ကိုအေးစက်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့ Kappa နှင့် mu opioid အဲဒီ receptor agonists ၏ Herz အေလှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများ။ Psychopharmacology ။ 1985; 86: 274-280 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2001; 2: 119-128 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ သမိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်: opiate နှင့်ကိုကင်းစွဲ၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ Pharmacological သိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2004; 25: 210-218 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 8: 1445-1449 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Malenka RC ။ အဆိုပါစွဲဦးနှောက်။ သိပ္ပံနည်းကျအမေရိကန်။ 2004; 290: 78-85 ။ [PubMed]
Nye သူ, Nestler EJ ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာနာတာရှည် Fos-related antigen ၏ induction ။ မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒ။ 1996; 49: 636-645 ။ [PubMed]
O'Dell LE, Roberts သည် AJ, Smith က RT ကို, Koob gf ။ စဉ်ဆက်မပြတ်အရက်ငွေ့ထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအပြီးအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေး Enhanced ။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2004; 28: 1676-1682 ။ [PubMed]
ကြားရှိ J ကို, septal ဧရိယာနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသလျှပ်စစ်ဆွကထုတ်လုပ် Milner P. အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1954; 47: 419-427 ။ [PubMed]
သံလွင် MF, Koenig HN, Nannini MA, Hodge CW ။ နောက်ဆက်တွဲအီသနောစားသုံးမှုအားဖြင့်အီသနောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်လျော့ချရေးစဉ်အတွင်း stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် extracellular CRF အဆင့်ဆင့်သို့ခြီးမွှောကျ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2002; 72: 213-220 ။ [PubMed]
Orsini ကို C, Koob gf, Pulvirenti အယ်လ် Dopamine တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးဆုတ်ခွာနောက်ကြောင်းပြန်။ Neuropsychopharmacology ။ 2001; 25: 789-792 ။ [PubMed]
Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ CRF နှင့် CRF ခြင်းဖြင့်မျိုးစုံအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ Modulation1 receptors ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2004; 77: 405-413 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Paterson NE, Markou အေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းပြီးနောက်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းစားသုံးမှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်။ Neuroreport ။ 2003; 14: 2229-2232 ။ [PubMed]
Paterson NE, Myers ကို C, Markou အေအကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုအပေါ်စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုကနေထပ်ခါတလဲလဲဆုတ်ခွာ၏။ Psychopharmacology ။ 2000; 152: 440-446 ။ [PubMed]
Pulvirenti L ကို, Balducci ကို C, Piercy M က, Koob gf ။ ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း dopamine agonist terguride ၏သက်ရောက်မှု၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1998; 286: 1231-1238 ။ [PubMed]
Pulvirenti L ကို, Koob gf ။ Lisuride ကြွက်များတွင်နာတာရှည်သွေးကြောသွင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 1993; 8: 213-218 ။ [PubMed]
Rachlin H ကို, အစိမ်းရောင်အယ်လ်ကတိသစ္စာ, ရွေးချယ်မှုများနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှု။ အပြုအမူများ၏စမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1972; 17: 15-22 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rasmussen DD, နိုငျငံ BM, Bryant, CA, Mitton DR, Larsen လုပ် SA, Wilkinson CW ။ နာတာရှည်နေ့စဉ်အီသနောနှင့်ဆုတ်ခွာ: 1 ။ အဆိုပါ hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများကို။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2000; 24: 1836-1849 ။ [PubMed]
Rassnick S က, Heinrich SC, Britton KT, Koob gf ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယသို့ corticotropin-releasing အချက်ရန်၏ Microinjection အီသနောဆုတ်ခွာ၏ anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများနောက်ကြောင်းပြန်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1993; 605: 25-32 ။ [PubMed]
ကြိမ် AK, Koo KL, Tejwani GA, Bhargava HN ။ discrete ဦးနှောက်ဒေသများ, ကျောရိုး, pituitary gland နှင့်ကြွက်များ၏အရံတစ်ရှူးအတွက် immunoreactive dynorphin (1-13) အဆင့်ဆင့်အပေါ်မော်ဖင်းအကိုက်သည်းခံစိတ်မှီခိုနှင့် abstinence ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1992; 584: 207-212 ။ [PubMed]
Rimondini R ကို, Arlinde ကို C, Sommer W က, မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် Heilig အမ် Long-တည်တံ့တိုးနှင့်အရက်ဖို့ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း။ FASEB ဂျာနယ်။ 2002; 16: 27-35 ။ [PubMed]
Rivier ကို C, Bruhn T က, အီသနော၏ခြိုငျ့ဒဗလျူ Effect အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးပေါ်တွင်ကြွက်များတွင်: corticotropin-releasing အချက် (CRF) ဆေးဝါးဗေဒ၏ဂျာနယ်နှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ 1984; 229: 127-131 ။ [PubMed]
Rossetti ZL, Hmaidan Y ကို, Gessa GL ။ mesolimbic dopamine လွှတ်ရာသိသိသာသာတားစီး: ကြွက်များတွင်အီသနော, မော်ဖင်းအကိုက်, ကင်းများနှင့်စိတ်ကြွဆေး abstinence တစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1992; 221: 227-234 ။ [PubMed]
စယ် mAh ။ မှီခိုဘာလဲ? ခုနှစ်တွင်: Edwards က, G, အယ်ဒီတာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးမူတည်။ Lexington စာအုပ်များ; Lexington MA: 1976 ။ စစ။ 182-187 ။
Sarnyai Z ကို, Biro အီး, Gardi J ကို, Vecsernyes M က, Julesz J ကို, Telegdy G. အဦးနှောက် corticotropin-releasing အချက်ကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် "စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သော" အပြုအမူ mediates ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1995; 675: 89-97 ။ [PubMed]
Schulteis, G, Markou တစ်ဦးက, Cole ကို M က, Koob G. အအီသနောဆုတ်ခွာဖြင့်ထုတ်လုပ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လျော့နည်းသွားသည်။ သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1995; 92: 5880-5884 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schulteis, G, Markou တစ်ဦး, ရွှေ LH, Stinus L ကို, Koob gf ။ opiate ဆုတ်ခွာ၏မျိုးစုံညွှန်းကိန်း၏ naloxone မှဆွေမျိုး sensitivity ကို: တစ်အရေအတွက်ထိုး-တုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1994; 271: 1391-1398 ။ [PubMed]
စူးရှသော opioid မှီခိုအတွက်အေးစက်လုပ်ငန်းစဉ်များအဘို့အလားအလာအခန်းကဏ္ဍ: Schulteis, G, Morse က AC အ, naloxone နှင့်အတူလျူဂျေပြန်လုပ်အတွေ့အကြုံကိုစူးရှမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2003; 76: 493-503 ။ [PubMed]
Schulteis, G, Yackey M က, Risbrough V ကို, Koob gf ။ ဓါတ်လှေကားပေါင်း-ဝင်္အတွက်အလိုအလျောက်နှင့် naloxone-precipitated opiate ဆုတ်ခွာ၏ Anxiogenic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1998; 60: 727-731 ။ [PubMed]
ကိုယ်ပိုင် DW, McClenahan AW, Beitner-Johnson က D:, Terwilliger RZ, Nestler EJ ။ ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် mesolimbic dopamine စနစ်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ synapses ။ 1995; 21: 312-318 ။ [PubMed]
Shaw-Lutchman tz, Barrot M က, Wallace T က, Gilden L ကို, Zachary V ကို, Impey S က, Duman RS, မုန်တိုင်း: D, Nestler EJ ။ naltrexone-precipitated မော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်ကစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-mediated ကူးယူ၏ဒေသတွင်းနှင့်ဆယ်လူလာမြေပုံ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 3663-3672 ။ [PubMed]
Shippenberg TS, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မကြာမီကတိုးတက်လာ။ ခုနှစ်တွင်: Davis က KL, Charney: D, ကွိုင်း JT, Nemeroff ကို C, အယ်ဒီတာများ။ Neuropsychopharmacology: တိုးတက်မှု၏ပဉ္စမမျိုးဆက်။ Lippincott ဝီလျံနဲ့ Wilkins; Philadelphia တွင်: 2002 ။ စစ။ 1381-1397 ။ 2002 ။
Slawecki CJ, Thorsell AK, Khoury AE, သင်္ချာ AA ကို, Ehlers CL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းနှင့်ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် CRF တူသောနှင့် NPY ကဲ့သို့ immunoreactivity တိုးလာ: စိုးရိမ်စိတ်တူသောနှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်း။ Neuropeptides ။ 2005; 39: 369-377 ။ [PubMed]
ရှောလမုန်သည် RL, Corbit JD ။ လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုပြိုင်ဘက်-ဖြစ်စဉ်ကိုသီအိုရီ: 1 ။ ၏ယာယီဒိုင်းနမစ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1974; 81: 119-145 ။ [PubMed]
သီချင်း ZH, Takemori AE ။ စသည်တို့အတွက် mouse ကိုကျောရိုးကြိုးကနေ immunoreactive dynorphin တစ်ဦး၏လွှတ်ပေးရေး corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့် stimulation ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1992; 222: 27-32 ။ [PubMed]
Spangler R ကို, Unterwald EM, Kreek MJ ။ Bing "ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက် caudate-putamen အတွက် mRNA prodynorphin တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးဖြစ်ပေါ်သည်။ မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန။ 1993; 19: 323-327 ။ [PubMed]
Specio SE, Wee က S, O'Dell LE, Boutrel B, Zorrilla EP, Koob gf ။ CRF1 အဲဒီ receptor ရန်ကြွက်များတွင်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuate ။ Psychopharmacology ။ 2008; 196: 473-482 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Stinus L ကို, Caille S က, Koob gf ။ Opiate ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် 16 ရက်သတ္တပတ်မှတက်ဘို့ကြာရှည်ခံသည်။ Psychopharmacology ။ 2000; 149: 115-120 ။ [PubMed]
Stinus L ကို, Le Moal က M, Koob gf ။ နျူကလိယ accumbens နှင့် amygdala opiate ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှအလွှာဖြစ်ကြသည်။ neuroscience ။ 1990; 37: 767-773 ။ [PubMed]
Thorsell တစ်ဦးက, Rapunte-Canonigo V ကို, O'Dell L ကို, ချန်လုပ် SA ဘုရင်တစ်ဦးက, Lekic: D, Koob gf, Sanna PP ။ viral vector-သွေးဆောင် NPY overexpression ပြောင်းပြန် amygdala Wistar ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲခြို့ငဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အရက်စားသုံးမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဦးနှောက်။ 2007; 130: 1330-1337 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Thorsell တစ်ဦးက, Slawecki CJ, Ehlers CL ။ နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်: neuropeptide Y နှင့် Wistar ကြွက်များတွင်အီသနောစားသုံးမှုအပေါ် corticotropin-releasing အချက်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2005a; 161: 133-140 ။ [PubMed]
Thorsell တစ်ဦးက, Slawecki CJ, Ehlers CL ။ အီသနောထိတွေ့မှုတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူ wistar ကြွက်များတွင်အရက်သေစာသောက်သုံးသူနဲ့ဆက်စပ်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူတွေအပေါ် neuropeptide Y ကိုသက်ရောက်မှု။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2005b; 29: 584-590 ။ [PubMed]
Tucci S က, Cheeta S က, ရှေ P ကို, အရှေ့တောင် File ။ အချက်ရန်, α-helical CRF လွှတ် Corticotropin9-41, နီကိုတင်း-သွေးဆောင်ခြွင်းချက်မရှိ, စိုးရိမ်ပူပန်အေးစက်ပေမယ့်မပေးနောက်ကြောင်းပြန်။ Psychopharmacology ။ 2003; 167: 251-256 ။ [PubMed]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Sabino V ကို, Koob gf ။ corticotropin-releasing အချက်-2 အဲဒီ receptor activation ကနေတဆင့်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်: မှီခိုကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူနှင့်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန။ 2004; 28: 865-872 ။ [PubMed]
Valentino RJ, ခြေလျင် SL, စာမျက်နှာ ME ။ corticotropin-releasing အချက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ noradrenergic ဖျန်ဖြေပေါင်းစပ်ဘို့ site တစ်ခုအဖြစ် locus coeruleus ။ ခုနှစ်တွင်: ရွှေချောင်း Y ကို, Rivier ကို C, အယ်ဒီတာများ။ Corticotropin-ဖြင့်ထုတ်လွှ Factor နှင့် Cytokines: အစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်အခန်းက္ပ။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 1993 ။ စစ။ 173-188 ။ (စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, vol 697) [PubMed]
Valentino RJ, စာမျက်နှာ ME, Curtis AL ။ hemodynamic စိတ်ဖိစီးမှုများက noradrenergic locus coeruleus အာရုံခံ၏ activation corticotropin-releasing အချက်၏ဒေသခံလွှတ်ပေးရန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1991; 555: 25-34 ။ [PubMed]
ဗန် Bockstaele EJ, Colago EE, Valentino RJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ခြေလက်အင်္ဂါများ Co-ရာ၌ခန့်များအတွက်အလွှာ: Amygdaloid corticotropin-releasing အချက်ပစ်မှတ် coeruleus dendrites locus ။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ်။ 1998; 10: 743-757 ။ [PubMed]
Van Dyke ကို C, Byck R. ကင်း။ သိပ္ပံနည်းကျအမေရိကန်။ 1982; 246: 128-141 ။ [PubMed]
midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကိုနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Vezina P. အသိ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2004; 27: 827-839 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2000; 10: 318-325 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ၏အခန်းက္ပ: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကနေရလဒ်တွေကို။ အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 2002; 13: 355-366 ။ [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Hitzemann R ကို, ချန်အေဒီ, Dewey SL, Pappas N. detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝ။ 1997; 386: 830-833 ။ [PubMed]
Walker က BM, Rasmussen DD, Raskind MA, Koob gf ။ α1အီသနောများအတွက်တုံ့ပြန်အတွက် -Noradrenergic အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလုပ်ကွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုး။ အရက်။ 2008; 42: 91-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wee က S, Mandyam CD ကို, Lekic DM, Koob gf ။ α1အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှုများအတွက်တိုးမြှင့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် -Noradrenergic system ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 18: 303-311 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wee က S, ဝမ် Z ကို, Woolverton WL, Pulvirenti L ကို, Koob gf ။ aripiprazole ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတခုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း: D2 အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်မှုနှုန်းအပေါ်အဲဒီ receptor agonist ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 2238-2247 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weiss က F, Markou တစ်ဦးက, Lorang MT, Koob gf ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Basal extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်န့်အသတ်-access ကို Self-အုပ်ချုပ်မှုအပြီးကိုကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကယုတ်လျော့နေကြသည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1992; 593: 314-318 ။ [PubMed]
Weiss က F, Ciccocioppo R ကို, Parsons LH, Katner S ကိုလျူက X, Zorrilla EP, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ဘင်-ရက်ရှာဟာအို Angeletti S က, ရစ်ချတာ RR ။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့် relapse: neuroadaptation, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အေးစက်အချက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Quinones-Jenab V ကို, အယ်ဒီတာ။ ကိုကင်းစွဲ၏ဇီဝအခြေခံ။ သိပ္ပံနယူးယောက်အကယ်ဒမီ; နယူးယောက်: 2001 ။ စစ။ 1-26 ။ (စီးရီးခေါင်းစဉ်: သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်, vol 937) [PubMed]
Weiss က F, Parsons LH, Schulteis, G, Hyytia P ကို, Lorang MT, Bloom FE, Koob gf ။ အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှီခိုကြွက်များတွင် accumbal dopamine နဲ့ 5-hydroxytryptamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဆုတ်ခွာ-ဆက်စပ်ချို့တဲ့ restores ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1996; 16: 3474-3485 ။ [PubMed]
Wikler စမ်းသပ် Self-စညျးမဉျြးစညျးကမျး Re-စွဲမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့နေစဉ်အတွင်းတစ်လူနာများ၏အေတစ်ဦးကဆိုက်ကိုဒိုင်းနမစ်လေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါလပတ်။ 1952; 26: 270-293 ။ [PubMed]
Zhang က Z ကိုစူးရှသောမော်ဖင်းအကိုက်မှီခိုရာမှ Schulteis G. အ Withdrawal ဓါတ်လှေကားပေါင်းဝင်္အတွက်တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများကလိုက်ပါသွားသည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 2008; 89: 392-403 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]